“ငါတို့ကို တိုင်းပြည်နှင့်သာသနာက လေးစားတယ်ဆိုတာ အများအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ပဲ၊ ငါကတော့ သာသနာ့ကျေးကျွန်အဖြစ်ခံယူပါရစေလို့ ဒီလိုပဲ ခံယူထားပါတယ်၊ ငါတပည့်တွေကိုလည်း ကိုယ့်သာသနာ ကိုယ့်ဘာသာအတွက် အနစ်နာခံတဲ့စိတ် စွန့်လွှတ်တဲ့စိတ်နှင့် အလုပ်လုပ်စေချင်တယ်
Posted by Oasisthetoo at 3:13 PM No comments: Links to this post
ထွေထွေ သားသား ကလေးများ၌
Posted by Oasisthetoo at 3:10 PM No comments: Links to this post
ဦးတည်မပျက် ရှေ့သို့ဆက် လူ့ဘုံထုံးစံကဲ့ရဲ့ဒဏ်ဖြင့် ရန်မာန်ပိတ်သဲခရီးခဲ၌ စိတ်ဇွဲသန်သန်နောက်မပြန်ဘဲ ရဲမာန်ရဲသွေးရဲစိတ်မွေးလျက် ရဲသွေးနီနီစီရရီဖြင့် ဦးတည်မပျက်==== ရှေ့သို့ဆက်လော့။
Posted by Oasisthetoo at 3:04 PM No comments: Links to this post
မေး။ ။ အရှင်ဘုရား တပည့်တော် ရှစ်ပါးသီလမှာ ဥစ္စာသယန မဟာသယန-မြင့်သောနေရာ မြတ်သောနေရာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး တပည့်တော်တို့သူငယ်ချင်းတွေ ပြောဆို ကြတဲ့အခါ မျိုးစုံဖြစ်နေပါတယ်ဘုရား။ အရှင်ဘုရား သင်္ကြန်တွင်းတုန်းက မေတ္တာရှင်ဆရာတော်ရိပ်သာမှာ အမေးအဖြေတုန်းက ဖြေဆိုခဲ့တာကလည်း ကိလေသာစိတ်မဖြစ်အောင် ဇိမ်ကျမဲ့နေရာတွေ၊ မာန်မာနတက်စေမဲ့ ထိုင်ခုံအိပ်ရာတွေကို အသုံးမပြုရလို့ အကျဉ်းချုပ်သာ ဖြေဆိုသွားတာမို့ တပည့်တော်တို့ သေချာကျနစွာ ရှောင်ကြဉ်နိုင်အောင် အကျယ်တ၀င့် အချိန်ရရင် ရေးပေးစေချင်ပါတယ်ဘုရား။ ရိုသေလေးစားစွာ ဦးခိုက်လျက်......။
ဖြေ။ ။ သုတ်သီလက္ခန်ပါဠိတော်၊ မဇ္ဈိမခန်းတွင် ဥစ္စာသယန မဟာသယနနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရှောင်ကြဉ်ရမဲ့နေရာ (၂၀)ပြဆိုထားပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
၁။ လူများဆုံးအသုံးပြုသော ထိုင်ခုံ၊ အိပ်ရာတို့ထက် ခြေလေးချောင်းအမြင့်ရှိသော အထူးရှိသော ခုတင်၊ ထိုင်ခုံများ။
၂။ အခြေတွင် ခြင်္သေ့သားရဲရုပ်တပ်ထားသော ပလ္လင်နေရာ။
၃။ လက်လေးသစ်ထက် ကျော်လွန်သော မွေးရှည်ကော်ဇော။
၄။ အရုပ်ပန်းကွက်တို့ဖြင့် ဆန်းကြယ်စွာ ယက်လုပ်ထားသော သားမွေးအခင်း။
၅။ သားမွေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ခင်းနှီးဖြူ။
၆။ ပန်းပြောက်ခြယ်ထားသော သားမွေးအခင်း။
၇။ လဲမျိုး(၃)ပါးဖြင့် သွတ်သွင်းထားသော မွေ့ယာခင်း။
၈။ ခြင်္သေ့၊ ကျား၊ သစ်စသော အရုပ်တို့ဖြင့် ဆန်းကြယ်ထားသော သိုးမွေးခင်း။
၉။ နှစ်ဘက်အမွေးရှိသော သားမွေးအခင်း။
၁၀။ တစ်ဘက်သာအမွေးရှိသော သားမွေးအခင်း။
၁၁။ ရတနာ ရွှေငွေတို့ဖြင့် ချုပ်ကပ်လိမ်းကျံထားသော ပိုးချည်ရက်အခင်း။
၁၂။ ရတနာရွှေချည် ငွေချည်တို့အကြားတွင် ပိုးချည်ဖြင့်ရက်လုပ်ထားသော အခင်း။
၁၃။ ကချေသည်မ (၁၆)ယောက် ကလောက်သော သားမွေးကော်ဇော။
၁၄။ ကောင်းမြတ်သော ဆင်နှီးကုန်း။
၁၅။ ကောင်းမြတ်သော မြင်းနှီးကုန်း။
၁၆။ ဆင်မြင်ရထား၌ခင်းသော နု့ညံ့အိစက်သည့် အခင်း။
၁၇။ ညောင်စောင်းပမာဏ ချုပ်လုပ်ထားသည့် သစ်နက်ရေးအခင်း။
၁၈။ ၀ံပိုင့်ရေဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် မြတ်သောအခင်း။
၁၉။ နီသော ဗိတာန်မျက်နှာကြက်အောက်ရှိ သားမွေးအခင်း။
၂၀။ ခြေအုံး ခေါင်းအုံး နှစ်ဘက်တပ်ထားသည့် အခင်း။
Posted by Oasisthetoo at 3:00 PM No comments: Links to this post
မေး။ ။ အရှင်ဘုရား တပည့်တော်ကြီးပွားချမ်းသာအောင် ဘယ်လိုလုပ်လုပ် စည်းစိမ်ဥစ္စာ မတိုးတတ်ဘဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုပြုလုပ်ရပါမလဲဘုရား။
ဖြေ။ ။ ကြီးပွားတိုးတတ်ချင်ပါက
၁။ မိမိရရှိသော ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ဖြင့် မိဘတို့အား ရိုသေစွာပြုစုကျွေးမွေးပါ။ အဲဒီအခါ မိဘတွေက ငါတို့သားသမီးလေး ကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ မေတ္တာစစ်မှန်ဖြင့် ဆုပေးကြလိမ့်မယ်။ အဲဒီမေတ္တာအကျိုးကြောင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာများ တိုးပွားလိမ့်မယ်။
၂။ မိမိရရှိသော ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ဖြင့် သားသမီး၊ လက်အောက်ငယ်သား အလုပ်သမားများကို ရိုသေစွာပြုစုကျွေးမွေးပါ။ အဲဒီအခါ သူတို့တွေက ကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ မေတ္တာစစ်မှန်ဖြင့် ဆုပေးကြလိမ့်မယ်။ အဲဒီမေတ္တာအကျိုးကြောင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာများ တိုးပွားလိမ့်မယ်။
၃။ မိမိရရှိသော ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ဖြင့် မိမိရဲ့လုပ်ငန်းရှင်များကို ရိုသေစွာပြုစုကျွေးမွေးပါ။ အဲဒီအခါ သူတို့တွေက ကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ မေတ္တာစစ်မှန်ဖြင့် ဆုပေးကြလိမ့်မယ်။ အဲဒီမေတ္တာအကျိုးကြောင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာများ တိုးပွားလိမ့်မယ်။
၄။ မိမိရရှိသော ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ဖြင့် မိရိုဖလာကိုးကွယ်လာတဲ့ နတ်ဒေ၀ါများကို ရိုသေစွာပြုစုကျွေးမွေးပါ။ အဲဒီအခါ သူတို့တွေက ကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ မေတ္တာစစ်မှန်ဖြင့် ဆုပေးကြလိမ့်မယ်။ အဲဒီမေတ္တာအကျိုးကြောင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာများ တိုးပွားလိမ့်မယ်။
၅။ မိမိရရှိသော ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ဖြင့် မြင့်မြတ်တဲ့ရဟန်းသာမဏေများကို ရိုသေစွာပြုစုကျွေးမွေးပါ။ အဲဒီအခါ သူတို့တွေက ကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ မေတ္တာစစ်မှန်ဖြင့် ဆုပေးကြလိမ့်မယ်။ အဲဒီမေတ္တာအကျိုးကြောင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာများ တိုးပွားလိမ့်မယ်။
အထက်ပါ အင်္ဂါ(၅)ချက်နဲ့ ပြည့်စုံသူသည် မည်သည့်အခါမှ ဆင်းရဲခြင်းမရှိဘဲ ကြီးပွားတိုးတတ်နေပါလိမ့်မည်။ (အံ၊ ၂၊ ၆၇)
Posted by Oasisthetoo at 10:44 PM No comments: Links to this post
သေခါနီးမှာ ဖြစ်ပေါ်လာသော အာရုံ(၃)မျိုး
မေး။ ။ အရှင်ဘုရား တပည့်တော် သေခါနီးမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အာရုံများရဲ့ အကြောင်းအရာကို သေချာကျနစွာ မသိသေးသဖြင့် အရှင်မြတ်အချိန်ရရင် ရေးသားပေးစေချင်ပါတယ်ဘုရား။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ရိုသေစွာ အဝေးကနေ ရှိခိုးလိုက်ပါတယ်ဘုရား။
ဦးဇင်းလည်း မြန်မာပြည်မှာ ကွန်ပျုတာနဲ့ အွန်လိုင်းသုံးရဖို့ အခြေအနေ မပေးတာကြောင့် အမေးအဖြေများကို မရေးနိုင်ဘဲ အကြွေးတွေ များနေပါတယ်။ အလုပ်ကလည်း တစ်ယောက်တည်းကို ခေါင်းမူးအောင် ရှုပ်နေတာမို့ ဘာစာကိုမှ မရေးဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ခုတော့ ရန်ကုန်ရောက်တုန်း အင်တာနက်လိုင်းကောင်းတာနဲ့ အမေးအဖြေလေးတွေကို တက်နိုင်သမျှ ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ သက်ရှိသတ္တ၀ါတိုင်းရဲ့ သေခါနီးသော်လည်းကောင်း၊ ပဋိသန္ဓေနေဆဲ၌လည်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အာရုံ(၃)ပါး ရှိပါတယ်။
(၁) ကံ-မိမိပြုလုပ်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်စေတနာများ၊ မကောင်းတဲ့လုပ်ရပ် စေတနာစိတ်များ ပေါ်လာခြင်း။ မိမိစိတ်ကောင်းရှိခဲ့တာလေးတွေ၊ စိတ်ကောင်းမရှိခဲ့တာလေးတွေကို စိတ်ထဲမှာမြင်ယောင်မိလာတာကို ဆိုလိုပါတယ်။
(၂) ကမ္မနိမိတ်-မိမိလှူဒါန်းပေးကမ်းခဲ့တဲ့ အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများ အာရုံပြု၍ ပေါ်လာခြင်း၊ ဥပမာ-ကောင်းတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူတစ်ပါးကို ပေးကမ်းခဲ့တာ တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ သူတစ်ပါးအတွက် အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်စေ မိမိစိတ်အာရုံမှာ ပေါ်လာပါတယ်။ မကောင်းတာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူဆိုရင် သူတစ်ပါးအသက် သတ်ခဲ့တာ၊ ခိုးခဲ့တာ၊ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ကျုးလွန်ခဲ့တာစတဲ့ မကောင်းမှုလုပ်ရပ်တစ်ခုခု ပေါ်လာခြင်းများကို ဆိုလိုပါတယ်။
(၃) ဂတိနိမိတ်-မိမိအနာဂတ်ဘ၀ဖြစ်ရမဲ့ ဘုံဘ၀၊ ခန္ဓာကိုယ်၊ ရုပ်ဆင်းသဏ္ဍာန်တို့ ပေါ်လာခြင်း၊ ဥပမာ-ကောင်းတာလုပ်ခဲ့သူဟာ ကောင်းရာဘ၀ဖြစ်တဲ့ လူ့ဘ၀ခန္ဓာကိုယ်၊ နတ်ဘ၀ခန္ဓာကိုယ်များ ထင်မြင်လာပြီး မကောင်းတာလုပ်ခဲ့သူကတော့ မကောင်းရာဘ၀ဖြစ်တဲ့ အပါယ်လေးဘုံသား သတ္တ၀ါတို့ရဲ့ ဘုံဌာနတွေ၊ ငရဲခန္ဓာ၊ တိရစ္ဆာန်ခန္ဓာ၊ ပြိတ္တာခန္ဓာ၊ အသူရကာယ်ခန္ဓာများ ပေါ်လာကြပါတယ်။
ယခု ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်(၃)ခုထဲက တစ်ခုခုကိုတော့ သက်ရှိသတ္တ၀ါတိုင်း ကြုံတွေ့ရမှာမို့ မိမိတို့ရဲ့ အနာဂတ်ဘ၀ဟာ ဘယ်လိုဘယ်ပုံဖြစ်မဲ့ဆိုတာ မိမိကိုယ်တိုင် သေခါနီးဖြစ်စေ၊ နောက်ဘ၀ခန္ဓာဖြစ်ခါနီးဖြစ်စေ မြင်တွေ့ရမှာဆိုတော့ မိမိမသေခင်ကတည်းက ကောင်းတာလေးမြင်ချင်ရင် ကောင်းတာများပြုလုပ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ မမေ့ကြပါနဲ့လေ။
ဒီလောက် အကျဉ်းချုပ်ဖြေပြလိုက်ရင် နားလည်သဘောက်မယ်ထင်တာမို့ ဒီမျှနဲ့ပဲ နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါရစေ။ ဦးဇင်း မြန်မာပြည်ရောက်နေတုန်း ဟောကြားပေးခဲ့သမျှ တရားတွေထဲမှ သင်္ကြန်တွင်းတုန်းက မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ)ဆရာတော်ကျောင်းရိပ်သာမှာ အမေးအဖြေပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ တရားပုဒ်ရေ (၉)ခွေကိုလည်း တစ်ခွေတည်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားပြီးပါပြီ၊ အဲဒီခွေကို ဦးဇင်းသီရိလင်္ကာ မပြန်ခင် တက်နိုင်သမျှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဗဟုသုတတိုးပွားစေဖို့အတွက် ဖြန့်ဝေပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပေးပါဦးမယ်လေ။
စာဖတ်သူများ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာပြီး လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်......။
Posted by Oasisthetoo at 10:25 PM No comments: Links to this post
Posted by Oasisthetoo at 3:27 PM No comments: Links to this post
ငါသာ ငါ့ထက်၊ မာန်မတက်နှင့်
Posted by Oasisthetoo at 3:26 PM No comments: Links to this post
Time Magazine ကို ကျွန်တော်မုန်းသွားပြီ...
သေနတ်တစ်ချက်မဖောက်ခဲ့ဘူး... ဓါးတစ်လက်မစွဲကိုင်ခဲ့ဘူး... လူသတ်ဖို့တစ်ခွန်းမဟခဲ့ဘူး... ကိုယ်တိုင်လည်း သူတစ်ပါးကို မသတ်ဖြတ်ခဲ့ဘူး... သူများဘာသာဝင်တွေကို Genocide လုပ်ဖို့ မဟောကြားခဲ့ဘူး... ကဲ ဘယ်နားအကြမ်းဖက်နဲ့ နည်းနည်းလောက်ထောက်ပြပါ...
သူလုပ်နေတာတစ်ခုပဲရှိတယ် အဲဒါက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေ ကိုယ့်အမျိုးနဲ့ကိုယ့်ဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြဖို့ပဲ... အဲဒါကို ကမ္ဘာမှာကျော်ကြားလှတဲ့ ဘက်မလိုက်မဂ္ဂဇင်းလို့ ယူဆထားမိခဲ့တဲ့ မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Time Magazine က ထူးခြားမိုက်ရိုင်းစွာပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တကွ အမျိုးစောင့်ဥပဒေကို အားကျိုးမာန်တက် ဖော်ထုတ်နေတဲ့ ဆရာတော်ဦးဝီရသူကို အကြမ်းဖက်အသွင် ဖော်ထုတ်တင်ပြခဲ့ပါတယ်... အဲဒီ Time မဂ္ဂဇင်းရေးခဲ့တဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ link ကတော့...
>>> The Face Of Buddhist Terror >>> http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2146000,00.html တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်...
ဒီသတင်းကိုတင်တဲ့ Hannah Beech (Bitch) ဆိုတဲ့ သတင်းသမားမ ကိုလည်း ပြောချင်ပါတယ်... ငွေရရင်ပြီးရောဆိုပြီး သတင်းကို ဖြစ်ကတတ်ဆန်း တင်တတ်တဲ့အကျင့်ဟာ ခွင့်လွှတ်သည်းခံတတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေနဲ့တွေလို့ ခင်ဗျားသက်သာရာ ရသွားတာပါ... အကယ်၍ ဒီသတင်းမှာသာ "The Face Of Islamic Terror" ဆိုပြီးခင်ဗျားတင်မိရင်တော့ တင်ပြီးချက်ခြင်း ခင်ဗျားလည်ပင်းတွေယားလာပါလိမ့်မယ်... ဒါပေမယ့် စိတ်ချပါ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ခင်ဗျားကို အဲလောက်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဘာတစ်ခုမှ လုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး... ကျုပ်တို့ ဘာသာဝင်နဲ့ ကျုပ်တို့ လေးစားကိုးကွယ်ရတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကို ထိပါးတဲ့အတွက် ကျုပ်တို့ရဲ့ တုန့်ပြန်မှုက ခင်ဗျားကို တစ်သက်စာ မုန်းတီးသွားခြင်းနဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ Professional Life တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂျာနယ်လစ်ဘ၀ကိုပါ ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအားလုံးက အထင်သေးသွားခြင်းပါပဲ...
ကြားဖြတ်အနေနဲ့ "အမျိုးစောင့်ဥပဒေ" ရဲ့ အနှစ်သာရရှိလှတဲ့ အပိုဒ်လေးကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်... လက်မခံနိုင်တဲ့လူတွေနဲ့ သိပ်မငြင်းချင်ပါဘူး... မြန်မာမှန်ရင် မြန်မာစာ ကောင်းကောင်း ဖတ်တတ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်... အဲဒါကို လူပြိန်းတွေ နားလည်အောင် စာစကားနဲ့
"မြန်မာအမျိုးသမီးများဟာ လူမျိုးခြားဘာသာခြားနဲ့ ယူမယ်ဆိုရင် ယူလို့ရပါတယ် ဥပဒေအရ အဲဒါကို မတားမြစ်ပါဘူး... ဒါပေတိ ခင်ဗျားတို့ မိခင်လောင်းတွေအနေနဲ့ ဒီလိုယူပြီးခါမှ အတင်းဖိအားပေးခံရပြီး မိမိသဘောထားမပါပဲနဲ့ တခြားဘာသာကိုအတင်းသွတ်သွင်းခံရမဲ့အရေး အတွက် ဒီ အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်တဲ့ ဥပဒေကို ဆရာတော်တွေက ကြိုးစားပေးနေတာပါ"
ရှင်းအောင်ရေးပေးထားပါတယ်... ရှင်းမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်... လူ့အခွင့်အရေးသမားများ... အထူးသဖြင့် ဘယ်ကမှန်းမသိထွက်လာတဲ့ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ၅ ဖွဲ့... ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်နဲ့တကွ တတ်ယောင်ကားများ အားလုံးကို ရည်ရွယ်ပါတယ်... သေချာဖတ်ပါလို့လည်း တိုက်တွန်းပါတယ်...
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်အဆက်ဆက် ကျင်သုံးခဲ့တဲ့တရားတော်တွေတိုင်းမှာ သူတပါးကို ငြင်းပန်းနှိပ်စက်ဖို့ ဒုက္ခပေးဖို့ဟောတဲ့ တရားတော်တွေ တစ်ခုမှမပါပါဘူး... ဗုဒ္ဓသားတော်တွေဖြစ်တဲ့ သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာလည်း သူတပါးကို ဒုက္ခပေးဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ လူမျိုးတွေ ဘာသာဝင်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကမ္ဘာကသိပြီးသားပါ... လက်ရှိ ဆရာတော်ဦးဝီရသူရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ဝေဖန်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို ခံယူထားတဲ့ သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ ခင်ဗျားတို့အခုလို သံဃာတော်တွေကို စော်ကားမော်ကားပြောပြီး ဖေ့ဘုတ်တွေ ဘလောခ့်တွေမှာ လူတတ်ကြီးလုပ်ပြီး Like တွေ Comment တွေ ခံယူနေတာဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ငရဲပိုနေတဲ့ သရဏဂုံသုံးပါးကို စော်ကားသူ... ခင်ပွန်းကြီး ၁၀ ပါး ပစ်မှားစော်ကားတဲ့သူတွေ ဖြစ်နေပြီဆို မမေ့ကြပါနဲ့လို့ စေတနာနဲ့သတိပေးပြောကြားလိုပါတယ်... အကယ်၍ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့လို လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် တကယ်အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တယ် အလုပ်လုပ်ပေးနေကြတယ်ဆိုရင် သံဃာတော်တွေ ၀င်ပါစရာတောင်မလိုပါဘူး... ဘာကြောင့်ဝင်ပါရသလဲဆိုတာ မစဉ်းစားပဲ ၀င်မပါသင့်ဘူးဆိုတာကို မျက်စိမှိတ်ငြင်းဆန်နေကြတာဟာ သင်တော်ရဲ့လားလို့ပဲ ကျွန်တော်မေးချင်မိပါတော့တယ်...
ဒီပိုစ့်လေးဖြင့် အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ကိုယ်ကျိုးမပါ အသက်ပဓါနမထားပဲ အားကျိုးမာန်တက် လုပ်ဆောင်နေသော ဆရာတော်ဝီရသူ နှင့်တကွ မျိုးချစ်ဘာသာချစ် သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကို လေးစားစွာ မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်...
(အစကတော့ အင်္ဂလိပ်လိုပါ တင်မလို့ပါပဲ.. အခုတော့ ကျွန်တော် ဘာသာပြန်ဖို့ အားနည်းတဲ့အတွက် ဒီအတိုင်းပဲ မြန်မာလိုတင်လိုက်ပါတယ်... တပည့်တော် ကတိပျက်သွားတဲ့အတွက် ကတိပေးခဲ့မိတဲ့ ဆရာတော် သံဃာတော်အရှင်သူမြတ် အားလုံးကို တပည့်တော် ဒီနေရာကနေပဲ အနူးအညွှန့်တာင်းပန်လိုက်ပါတယ်ဘုရား...)
Posted by Oasisthetoo at 3:17 PM No comments: Links to this post
ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် ကမ္ဘာကျော်လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အတွေး အမြင် နှင့် မှတ်ချက်များ...
(၂) ဗုဒ္ဓသည် ဘာသာပြောင်းသူများကို အနိုင်ယူရန် တရားဟောခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊ တပည့်သာဝကတို့ကို အသိညဏ် အလင်းရရှိစေရန် တရားဟောခြင်း ဖြစ်သည်။ (စာရေးဆရာတစ်ဦး)
(၃) ဗုဒ္ဓနှင့် သာမန်လူသားတစ်ဦး၏ ကွဲပြားချက်မှာ လူကောင်းနှင့် အရူးကွဲပြားသကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။ (စာရေးဆရာတစ်ဦး)
(၄) အကယ်၍ ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာလိုအပ်ချက်များနှင့် ဖက်ပြိုင်သည့် ဘာသာရေးတစ်ခု ရှိခဲ့သည်ဆိုလျှင် လက်၎င်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ (အိုင်စတိုင်းလ် - Albert Einstein)
ခန္ဓာကိုယ်ကို သတ်ပစ်ခြင်းသည် အကျိုးမရှိပါ၊ ခန္ဓာကိုယ်က အပြစ်ကျူး လွန်ခြင်း ကိစ္စမှာ တာဝန်မရှိပါ၊ မသိမိုက်မဲစိတ်ကသာ အပြစ်ကို ကျုးလွန်၍ တာဝန်ရှိသူဖြစ်တယ်၊ မသိမိုက်မဲမှုလျင် လူသတ်သမားအစစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် မသိမိုက်မဲမှုကိုသာ သတ်ပစ်ရမယ်၊ ကြိုးပေးရမယ်၊ ဘယ်လို သတ်ဖြတ် ကြိုးပေးရမလဲ? လူသတ်သမားကို သစ္စာ ပညာ ဗုဒ္ဓဒေသနာတရား ဟောကြားပြီး မိုက်မဲမှု မသိမှုကို ပယ်သတ်ပြစ်နိုင်တယ်။ (မဟတ္တမဂန္ဒီ - Gandhi)
(၆) အနာဂါတ်ဘာသာတရားက သဘာဝလောကဓာတ်တခွင်လုံးအတွက် အဖြေပေးစွမ်းနိုင်သော အယူဝါဒတစ်ရပ်သာဖြစ်ရလိမ့်မည်။ အနှီးဘာသာသည် ပုဂ္ဂလအဓိဌာန်အယူအဆဖြင့် ဖန်တီးတီထွင်ထားသော ဖန်ဆင်ရှင်တရားနှင့် မသက်ဆိုင်စေသင့်။ တစ်ယူသန်အစွဲအလမ်းများနှင့် ယင်တို့မှ ပေါက်ဖွား ခဲ့သော အကိူးအကြောင်းဆက်ပညာကိုလည်း ကျော်လွှားလွန်မြောက် ရလိမ့်မည်။ ထိုဘာသာတရားသည် သာဘာဝလောကဓာတ်(ရုပ်တရား)နှင့်တကွ နာမ်တရာများကို လွှမ်းခြုံ၍ ဒိဌဓမ္မဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုကို ဖော်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိရပေလိမ့်မည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ထိုအရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံသည်ကို တွေ့ရ၏။ မျက်မှောက်ခေတ် သိပ္ပံပညာ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်စွမ်းသော ဘာသာတရား တစ်ခုရှိသည်ဆိုပါလျင် ထိုဘာသာတရားက ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လိမ့်မည်။ (အိုင်စတိုင်းလ် - Albert Einstein)
(၇) ကမ္ဘာပေါ်တွင် မည်သည့် ဘာသာသည် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သော ဘာသာဖြစ်သည် ဆိုခြင်းကို မပြောလျှင်မဖြစ် ပြောပါဟု သင်ကကျွနုုပ်အား တိုက်တွန်းခဲ့သော် ကျွနုုပ် စိတ်ပါလက်ပါ စာနာထောက်ထားသော အားဖြင့် "ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သော ဘာသာဖြစ်သည်" ဟု မဆိုင်းမတွ အဖြေပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ (ရာဘင်ဒြာနတ်တဂိုးလ် - Rabindranath Tagroe)
(၈) ဗုဒ္ဓ၏ကြီးမားသော အနှစ်နာခံမှု၊ စွန့်လွတ်မှုနှင့် ဘဝ၏သန့်ရှင်း စင်ကြယ်မှုတို့ဖြင် ဟိန္ဒူဝါဒအပေါ်တွင် မပျက်ပြယ်နိုင်သည့် အမှတ်တံဆိပ် တစ်ခုကို ထားရစ်ခဲ့ပြီး ဟိန္ဒူဝါဒသည် ထိုမြတ်သောဆရာအား အနန္တကျေးဇူး ကြွေးများ ပေးဆပ်ရန် ရှိနေပေသည်။ (မဟတ္တမဂန္ဒီ - Gandhi)
(၉) အကယ်၍ ပြဿနာတစ်ခုခုဖြေရှင်းဖွယ်ရာရှိခဲ့လျှင် ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့သည့် လမ်းစဉ်ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ
ဒီမိုကရေစီကျကျ စဉ်းစားဆင်ခြင်ရပေသည်။ (နေရူး - Nehru)
(၁၀) ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမများသည် ဟိန္ဒူဝါဒတွင် တစ်စိတ်တစ်ဒေသအားဖြင့် ပါဝင်အကျုံးဝင်နေသည်ဟု ကျွနုုပ်ဆင်ခြင်ယူဆမိပါသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဟိန္ဒူဝါဒအပေါ် ဂေါတမဗုဒ္ဓ က မည်ကဲ့သို့ ကြီးမားစွာ ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်ကို မည်သို့မျှ ပြန်လည်စူးစမ်းရှာဖွေရန် မဖြစ်နိုင်တော့ချေ။ (မဟတ္တမဂန္ဒီ - Gandhi)
(၁၁) သန့်ရှင်းသော နည်းနာနိဿယနှင့် မြင့်မြတ်သောသင်ကြားမှုများမှာ တစ်စုံတစ်ရာသော အယူဝါဒကြီး တစ်ခုကမျှ အလွမ်းသင့်အောင် မဆောင်ရွက် နိုင်သဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာမှ ကူးယူကြရပေသည်။ (အိပ်ခ်ျဂျီဝဲလ် - H.G. Wells - ဗြိတိသျှသမိုင်းပညာရှင်)
(၁၂) ရှင်တော်ဗုဒ္ဓ --- အရှင်ဘုရားဟောကြားတဲ့ ဒေသနာမှာရှိတဲ့ တခြား အရာတွေထက် အကြောင်းအရာ တစ်ခုအတွက်နှင့်ပဲ တပည့်တော် အရှင် ဘုရားရဲ့ တရားဒေသနာတော်ကို လေးစားမြတ်နိုးလှပါသည်။ အဲဒီအကြောင်း အရာဟာ ဘာလဲဆိုရင် တရားဒေသနာမှာ ပါတဲ့ အရာဝတ္ထုအားလုံးဟာ ပြတ်သားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အလိုလိုပင် ထင်ရှားနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ (ဟာမန်ဟက်စ် - ၁၈၈၇ - ၁၉၆၂ )
(၁၃) ပြစ်မူကျူးလွန်သူသည် ဘုရားသခင်ထံ တောင်းပန်အသနားခံရန် ဆုတောင်းဝတ်ပြုကြိုးစားမူတို့ဖြင့် အကုသိုလ်ဆိုးကျိုးမှ လွတ်မြောက်နိုင် သည် ဟု ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့က မယုံကြည်ချေ။ (ဂျွန်ဝေါလ်တားစ် - John Walters)
ကျွနုုပ်တို့ တတွေသည် ရုပ်ဝတ္ထုကြွယ်ဝမူ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေသည့် ကြားတွင် စိတ်ဓာတ်ရေးရာ အားဖြင့် ချွတ်ခြုံကျနေကြ ရပါသည်။ ရုပ်ဝတ္ထုကြွယ်ဝ သော်လည်း စိတ်ချမ်းသာမူ ကင်းသော အခြေအနေတွင် စိတ်၏ချမ်းသာမူ အမှန်တကယ်ရရန်အတွက် ဗုဒ္ဓ၏ကျင့်စဉ်ကို ကျင့်ကြံအားထုတ် ကြည့်ဖို့ သင့်လှပါသည်။ ဗုဒ္ဓကျင့်စဉ်သည် စိတ်ချမ်းသာမူကို အမှန်တကယ် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ (ဂျွန်ဝေါလ်တားစ် - John Walters)
(၁၅) သက်ရှိ သတ္တဝါများကို မညှင်းဆဲရန် နတ်ဘုရားများထံဝယ် ဆုတောင်း ပတ္တနာပြုခြင်း၊ ဘုန်းတော်ဘွဲ့များရွတ်ဆိုခြင်း၊ ယစ်ပူဇော်ခြင်းများကို မပြုလုပ် ရန် ဗုဒ္ဓသည် လူ့သမိုင်းတွင် အဦးဆုံး
အပြစ်ပြ၍ ဆုံးမပဲ့ပြင်ခဲ့သည်။ (Prof. Phys Davids)
(၁၆) ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်သည် ကမ္ဘာပေါ်ဝယ် အနုမြူဗုံးများ၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဗုံးများ ရှိနေသည်ထက်ပို၍လိုအပ်သောအချိန်
ဖြစ်သည်။ (နေရူး - Nehru)
(၁၇) ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘာသာတရားတီထွင်သူ ခေါင်းဆောင်အများစုမှာ မဟာခရီးသည်များ ဖြစ်ကြသည်။ ဘာသာတရားခေါင်းဆောင် ဓမ္မနာယက များထဲတွင် အကျင့်သိက္ခာ၊ ပညာညဏ်၊စဉ်းစားညဏ်၊ စိတ်နေသဘောထား အရာတို့၌ အမြင့်မြတ်ဆုံး ဖြစ်သည့် ဗုဒ္ဓသည် ခရီးသည် ဘုရင် ဖြစ်သည်။ (ရာဟုလာသံ ကစ္စည်း)
(၁၈) လူမှုဒုက္ခ သုက္ခအရှုပ်အထွေးများအတွက် ဗုဒ္ဓ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးတရားဒေသနာတော်သည် အတိတ်ကထက် ယနေ့တွင် ပို၍လိုအပ်ပေသည်။ (နေရူး - Nehru)
(၁၉) ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတွင် ဒေါသအလျှံ ထွက်သောအခါဟူ၍ မည်သည့်အခါမျှ မရှိချေ။ ဘုရားရှင်၏ နှုတ်တော်မှ အကြင်နာမဲ့သော စကားထွက်ပေါ်လာသည် ဟူ၍ မည်သည့် အခါမျှ မရှိပေ။ (Dr. S. Radhakrishnan)
(၂၀) ရှည်လျားလှသည့် သမိုင်းကြောင်း တစ်လျှောက်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အနေဖြင့် အခြားဘာသာဝင်များကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဟူသော မှတ်တမ်း မှတ်ရာ တစ်စုံတစ်ရာမျှ မရှိပါပေ။ (ပါမောက္ခရီးစ်ဒေးဗစ် - Prof. Rhys Davids )
(၂၁) ဘာသာကို ကျုပ်လက်ခံ ယုံကြည်နိုင်ခြင်း မရှိပါ၊ သို့သော် ကမ္ဘာ့ ဘာသာကြီးများ အနက် တစ်စုံတစ်ခုသော ဘာသာကို လက်ခံရန် အကြောင်း များ ပေါ်ပေါက် လာခဲ့သော် မိမိလက် ခံနိုင်မည့် ဘာသာတရားမှာ " ဗုဒ္ဓဘာသာ" ဖြစ်ပါသည်။ (Bertrand Russell, English Philosopher)
(၂၂) ဗုဒ္ဓဝါဒသည် ယုံကြည်မှုထက် သိမှုနှင့် ရှုမြင်မှုကိုသာ အဓိကထားသည်။ ဗုဒ္ဓ၏ သွန်သင်ဆုံးမမှု (တရားတော်) များသည် "ဧဟိ ပဿိကော လာလှည့် ရှူလှည့်" ဟုဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုသာ ပြု၍လာပြီး ယုံကြည်လော့ ဟုမဆိုပေ။ (ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဝါပိုလာရာဟုလာ - Ven. Dr. W. Rahula)
(၂၃) ဗုဒ္ဓသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဘုရားသခင် (သို့) နတ်ဘုရား များ၏ ကူညီမှု မြူတစ်စိမျှမပါဘဲ လူတိုင်းကိုယ်တိုင်ရယူနိုင်သည့် လွတ်မြောက် ရေးကို ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် အဦးဆုံး ထုတ်ဖော်ကြေငြာခဲ့သည်။ (Prof. Eliot)
(၂၄) နှလုံးသားမှာ ချမ်းသာစေတဲ့ တရားမရှိလျှင် စည်းစိမ်ဥစ္စာ မည်မျှပြည့်စုံ စေကာမှု ချမ်းသာနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ (ဒလိုင်လားမား - Dalai Lama)
(၂၅) လွတ်လပ်မှု မပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အမိန့်ဟာ ညှင်းဆဲနှိပ်စက်မှု ဖြစ်သွား နိုင်တယ်။ အမိန့်မပါတဲ့ လွတ်လပ်မှု ဟာလည်း ဖရိုဖရဲ ဖြစ်သွားနိုင်တာပဲ။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် လွတ်လပ်မှုကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ရမယ်။ ဖရိုဖရဲဖြစ်မှုကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်စွမ်း ရှိရမယ်။ (ဒလိုင်လားမား - Dalai Lama)
(၂၆) ဤအရာ လူသားသစ်ပင်မှာ နှစ်ပေါင်းကုဋေ့ကုဋေ့တစ်ကြိမ်သာပွင့်ခဲ့တာ ပညာရနံ့ မေတ္တာပျားရည်စက်များလောကကို ပြည့်ဝစေတာ လူသား ပန်းတစ်ပွင့်ပါ။ (ဆာအက်ဒွင်အာနိုး - Sir Edwin Arnold)
(၂၇) ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ခေတ်သစ် သိပ္ပံပညာသည် အသိပညာဆိုင်ရာ အလွန် နီးကပ်ဆက်စပ်စွာ တည်ရှိနေကြောင်း ကျွန်ုပ်မကြာမကြာ ဆိုခဲ့ပြီး ထပ်ခါ တလဲလဲ ပြောဆိုပါဦးမည်။ (ဆာအက်ဒွင်အာနိုး - Sir Edwin Arnold)
(၂၈) ဗုဒ္ဓဝါဒသည် လောကနှင့်ဘဝ ၏ တကယ်ပကတိ အဖြစ်မှန်ကိုသာ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရကား သဘာဝဓမ္မအတိုင်း ရှုမြင်သော ဝါဒဟု ဆိုရပေမည်။ (ဆရာတော် ဒေါက်တာဝါပိုလာရာဟုလာ - Ven. Dr. W. Rahula)
(၂၉) များသောအားဖြင့် ဘာသာရေးဆရာ များသည် ၎င်းတို့၏တပည့်များကို အခြားဘာသာများနှင့် စပ်ဆိုင်သည့် ကျမ်းစာများ၊ အယူဝါဒများ၊စာပေများကို ဖတ်ရှူလေ့လာခွင့် မပြုဘဲ တားမြစ်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓဝါဒတွင် ဤအဖြစ်မျိုး လွန်စွာ နည်းပါးပေသည်။ (ဖရခန္တီပါလော)
(၃၀) စွမ်းရည်သတ္တိ ဘယ်လောက် သိမ်ဖျင်းသူ ပင်ဖြစ်ပါစေ တရားတော်ရဲ့ တန်ခိုးကြောင့် သတ္တိဗျတ္တိ ပြည့််ဝလာစေ ပါတယ်။ အညံ့စားလူတစ်ဦးကို အတော်ဆုံး လူဖြစ်လာစေတာဟာ တရားတော်ရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော် ကြောင့်ပါပဲ။ (ဂိုအင်ဂါ - SN Goenka)
အရှင်သုခမိန္ဒ (စဝ်ဆုခမ်း) နှင့်အရှင်ဝိဇယ ရေးသားပြုစုထားသော " ဗုဒ္ဓအနု ပညာပြခန်း " စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Oasisthetoo at 3:11 PM No comments: Links to this post
နုနယ်ရုပ်ဆင်း၊ ပျိုမြစ်ခြင်းကား၊ အိုမင်းနောက်ဆုံး ရှိချေ၏။
ဥစ္စာဆင်မြင်း၊ ပေါများခြင်းကား၊ ယိုယွင်းနောက်ဆုံး ရှိချေ၏။
၀ိဥာဏ်ထင်းလင်း၊ သက်ရှင်ခြင်းကား၊ သေခြင်းနောက်ဆုံး ရှိချေ၏။
ချစ်ခင်ပေါင်းသင်း၊ ဆက်ဆံခြင်းကား၊ ကွေကွင်းနောက်ဆုံး ရှိချေ၏။
တက်ကြွားကြွကြွ၊ မြင့်လွန်းကလည်း၊ လျှောကျနောက်ဆုံး ရှိချေ၏။
ခုံခင်ခယ၊ ချစ်သမျှကား၊ သောကနောက်ဆုံး ရှိချေ၏။
ပွဲလယ်ပြင်ပ၊ ချီးမွမ်းကြလည်း၊ ရှုတ်ချနောက်ဆုံး ရှိချေ၏။
ကြည်သာရွှင်ပြ၊ ချမ်းသာလှလည်း၊ ဒုက္ခနောက်ဆုံးရှိချေ၏။
Posted by Oasisthetoo at 2:53 PM No comments: Links to this post
သေခါနီး စိတ်ကလေး ထားတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ နာတယ် သိတယ် အသိတွေဖြစ်ခွင့်မပေးနဲ့။ နာလိုက်တာ ကိုက်လိုက်တာဆို စိတ်သာချ အပါယ်လေးပါးပဲ။ ရှိတာကခန္ဓာငါးပါး ရုပ်နှင့်နာမ်။ ရုပ်နာမ်ဖြစ်ပျုက်တာ မမြင်လို တငါငါ စွဲနေကြတာ ၊ ငါစိတ်နဲ့ သေရင်ငါသာခံကြပေတော့။ ငါဆိုတဲ့ ဒိဠိမပြုတ်လို့ လေးဘက်ထောက်၊ မိုးကျောခိုင်းပြီး အပါယ်လေးပါးဆင်းရတာ။ ငါစွဲပြုတ်အောင် ၀ိပသာနာ အလုပ်လုပ်ကြ၊ မလုပ်ရင် စုံးစုံး မြုပ်ကြလိမ့်မယ်။ လာလမ်းမပြန်ချင်ကြပါနဲ့။ ရုပ်က ဖောက်ပြန်တယ်။ နာမ်ကခံစားတယ်။ ရုပ်ရုပ်ချင်းတိုက်ခိုက်ပြီးမှ နာမ်ကခံစားတာ၊ နာမ်၏လက္ခာဏာ ခံစားပြီး ပျက်တာကိုသိ၊ အဲဒီပညာသိလေးရဖို့ အရေးကြီးတယ်။ သေရင်လည်းစိတ်ကလေး အပြင်မထွက်ဘဲနဲ့ တရပ်စပ်ကြီး အသိလိုက်နေရမှာ။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟမကြောက်နဲ့၊ အသိမလိုက်မှာကြောက်၊ ရှေ့စိတ်ကတော်ချင်ရင် နောက်စိတ်ကတွန်းတင်။ သောတာပန်၊ သကဒါဂမ်၊ အနာဂမ်၊ ရဟန္တာဆိုတာစိတ်ပဲ။ စိတ်သိချင်ရင် အလုပ်လုပ်ကြ၊ သူများစိတ်ကျော် မစစ်နဲ့။ ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စစ်။ သူများအပြစ်မရှုနဲ့ကိုယ်အပြစ်ကိုယ်ရှု။ အပြောသမားမဖြစ်စေနဲ့။ အလုပ်သမားဖြစ်ပါစေ။
Posted by Oasisthetoo at 3:20 PM No comments: Links to this post
သပြေကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ မရဏသတိကထာ ၁။ အဓုဝံ မေ ဇီဝံ
မေ-မရဏဖတ် ကျမသက်ရှင် သက်ရှိဖြစ်နေသော ငါ၏
အဓုဝံ-တစ်နေ့လျှင် ပျက်ရမလွဲ မမြဲပါတကား။
ငါ့သက်ဇီဝ တည်မရမဲ့ မုချသေချာ
၂။ ဓုဝံ မေ မရဏံ
မေ- ခန္ဓာဘိဇ္ဇန အနစ္စဖြင့် စိတ်မချရသော ငါ၏
မရဏံ-ဤဘ၀မှ လျှောကျစုတေ အခြေမလှ သေရခြင်းသည်၊
ဓုဝံ ရှောင်မရသာ ခွာမရမြဲ မလွဲမုချပါတကား။
၃။ အ၀ဿံ မယာ မရိတဗ္ဗမေ၀
မယာ-သေမင်းအစာ ခန္ဓာဖက်မိ အသက်ရှိနေသော ငါသည်၊
အ၀ဿံ-လွတ်နိုင်ဖို့ရေး မြှော်တွေးမမြင် စင်စစ်အမှန်ပင်၊
၄။ မရဏံ မေ ဘ၀ိဿတိ
မရဏမင်း သူ့လက်တွင်းသို့ သက်ဆင်းရမှာ
မလွဲသာသည် သူငါကြုံရ သဘာဝမို့ ဤအတွက်တာ
တစ်နေ့ခါ သေမှာ မလွဲပါတကား။
၅။ ဇီဝိတံ မေ နိရုဇ္ဇျိဿတိ
ရုပ်နာမ်နှစ်ချက် ငါ့အသက်မှာ မပျက်ရှည်ကြာ
မတည်သာခဲ့ သေခါချိန်ရောက် သရုပ်ဖောက်
၆။ ယထာယံ မတော တထာ မယံ မရိဿမ
ဤ(ဦးဖြူ)သည် ဇီဝန်ပျက်ကြွေ အခြေမလှ သေခဲ့ရသို့
ထ်ို့အတူသာ ငါတို့မှာလည်း ခန္ဓာရွေ့ရ သေနေ့ကျ
သမ္ပဒါ ခဏ ဘင်္ဂုရာ၊
သဗ္ဗမုပ္ပာဒိ ဘင်္ဂုရံ။ ။(ပဉ္စတန္တြ)
၁။ အများသတွာ ကိုယ်ခန္ဓာကား
ဖျက်အဆီးဖြင့် ပျက်စီးဖို့ရာ နီးလှစွာ
၂။ စုကြဆောင်းကြ သိမ်းဆည်းကြသည့်
ဓနဥစ္စာ ရတနာလည်း မကြာရှည်ကြ
၃။ အိမ်မြေလယ်ယာ ရတနာသီးသီး
ခင်မင်နွဲကြ တွဲသမျှ ကွဲရနောက်ဆုံးပါတကား။
၄။ သတွာသင်္ခါရ ဖြစ်သမျှတို့ ကာလရှည်ကြာ
မတည်သာခဲ့ ဖြစ်လာပျက်ရ အနိစ္စ လောက သဘောပါတကား။
၅။ အသက်ဇီဝိန် ကိုယ့်ငွေ့ရှိန်နှင့်
၀ိညာဉ်မန ဤသုံးဝတို့ လုံးဝစွန့်ခွာ
ဤအခါ၌ ခန္ဓာသမုတ် ဘူတရုပ်ကား သရုပ်မမှန်
၆။ ဘယ်သက်ရွယ်မှာ ဘယ်ရောဂါနှင့် ဘယ်ခါကာလ
ဘယ်ဒေသ၌ သေရမည်တာ တို့သူငါ မှန်စွာမသိပါတကား။
၇။ မြေ၊ရေ၊လေ၊မီး ဓာတ်ကြီးလေးထွေ အနေကျကျ
အခြေလှ၍ မျှတနေစဉ် အသက်ရှင်လည်း အကြင်အခါ
ဓာတ်လေးဖြာတို့ အာဏာဟုန်ပြ သူပုန်ထသော် ပျက်ရကျေရခြေမလှ သေရချေဦးမည်။
Posted by Oasisthetoo at 4:16 PM No comments: Links to this post
*လောကတွင် ပျက်စီးခြင်း ဆုတ်ယုတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော တရားများ*
မြတ်စွာဘုရားရှင် မင်္ဂလာသုတ်ဟောအပြီး နောက်တညမှာ ပရာဘ၀သုတ်ကို ဟောကြား
တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တရားနာလိုသူများကိုယ်စား နတ်သားတစ်ပါးက လောကမှာ
ပျက်စီးခြင်း ဆုတ်ယုတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော တရားများဟာ ဘယ်လိုတရားတွေများ
ဖြစ်ပါသလဲဟု လျှောက်ထားပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်က နတ်သားမေးလျှောက်သော
တစ်ဆယ့်နှစ်ကြိမ်ကို တစ်ဆယ့်နှစ်ဂါထာနဲ့ ဖြေဆိုတော်မူခဲ့ပြီး
အချက်အရေအတွက်အားဖြင့် နှစ်ဆယ့်လေးချက် ပါဝင်ပါတယ်။
ကြီးပွားသူကိုလည်း သိရန်လွယ်ကူ၏။ ပျက်စီးဆုတ်ယုတ်သူကိုလည်း
သိရန်လွယ်ကူလှပေ၏။ တရားကိုလိုလားတောင့်တသူသည် ကြီးပွားရ၏။
၁။ တရားကို မလိုလား မတောင့်တ မုန်းထားသူသည် ပျက်စီးရ၏။
မြတ်စွာဘုရား၏ အဖြေ (၂)
၂။ ထိုသူသည် သူတော်မဟုတ် သူယုတ်မာတို့ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုး၏။
၃။ သူတော်ကောင်းတို့ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုမပြု။
၄။ သူယုတ်မာတို့၏ တရားကို နှစ်သက်မြတ်နိုး၏။ ထိုသုံးမျိုးသည်
၅။ အကြင်သူသည် အိပ်စက်ငိုက်မျဉ်းလေ့ရှိ၏။
၆။ အပေါင်းအဖော်၌ မွေ့လျော်လေ့ရှိ၏။
၇။ စကားပြောမှု၌ မွေ့လျော်လေ့ရှိ၏။
၉။ လျင်စွာအမျက်ထွက်လေ့ရှိ၏။ ထိုသူ၏ ထိုအကြောင်းငါးမျိုးသည်
၁၀။ အကြင်သူသည် အိုမင်း၍ ပစ္ဆိမအရွယ်သို့ ရောက်ပြီးသော အမိကိုလည်းကောင်း၊
အဘကိုလည်းကောင်း၊ ကျွေးမွေးပြုစုနိုင်စွမ်း ရှိသူဖြစ်ပါလျက် မကျွေးမွေး
မပြုစုလေ၊ ထိုသူ၏ မကျွေးမွေး မပြုစုခြင်းသည် ပျက်စီးဆုတ်ယုတ်ကြောင်းတည်း။
၁၁။ အကြင်သူသည် ဗြဟ္မဏကိုလည်းကောင်း သာမဏကိုလည်းကောင်း ထိုမှတစ်ပါးသော
ဖုန်းတောင်းယာစကာကိုလည်းကောင်း ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့် ဖိတ်ကြားပြီးဖြစ်လျက်
မုသားပြောဆိုခြင်းဖြင့် လှည့်ပတ်၏။ ထိုသူ၏လှည့်ပတ်ခြင်းသည်
၁၂။ အကြင်သူသည် များစွာသောစည်းစိမ်ရှိသူ၊ အသပြာရှိသူ၊ စားဖွယ်နှင့်
ပြည့်စုံသူဖြစ်ပါလျက် ကောင်းမြတ်သော ဘောဇဉ်တို့ကို တစ်ယောက်တည်း
စားသုံး၏။ ထိုသူ၏ စားသုံးခြင်းသည် ပျက်စီးဆုတ်ယုတ်ကြောင်းတည်း။
၁၃။ အကြင်သူသည် အမျိုး "ဇာတိ" မာန်ခက်ထန်၏။
၁၄။ ဥစ္စာ "ဓနမာန်" ခက်ထန်၏။
၁၅။ အနွယ် "ဂေါတ္တ" မာန်ခက်ထန်၏။
၁၆။ မိမိဆွေမျိုးတို့ကိုလည်း မထီမဲ့မြင်ပြု၏။ ထိုသူ၏ ထိုအကြောင်း
၁၇။ အကြင်သူသည် မိန်းမကြူး၊
၁၉။ လောင်းကစားကြူးသည်ဖြစ်၍ ရတိုင်းရတိုင်းသော ဥစ္စာကို ဖျက်ဆီး၏။ ထိုသူ၏
၂၀။ အကြင်သူသည် မိမိမယားဖြင့် မရောင့်ရဲဘဲ ပြည့်တန်ဆာမတို့၌ ပြစ်မှား၏။
၂၁။ သူတစ်ပါးသားမယားတို့၌ ပြစ်မှား၏။ ထိုသူ၏ ထိုအကြောင်းနှစ်မျိုးသည်
မြတ်စွာဘုရား၏ အဖြေ (၁၀)
၂၂။ အရွယ်လွန်ပြီးသော ယောင်္ကျားသည် တည်သီးသဖွယ် ငယ်သောသားမြတ်ရှိသော
မိန်းမငယ်ကို သိမ်းမြန်းဆောင်ယူ အိမ်သူပြုလုပ်၏။ ထိုမိန်းမငယ်အား
ယောင်္ကျားတစ်ပါးအတွက် စိတ်မချရသောကြောင့် မအိပ်နိုင်၊
ထိုမအိပ်နိုင်ခြင်းသည် ပျက်စီးခြင်း၏ အကြောင်းတည်း။
၂၃။ အကြင်သူသည် ငါ အမဲအစရှိသော အစားအစာတို့၌ မက်မောသော သဘောရှိသော
ဥစ္စာကို စည်းကမ်းမဲ့ ဖရိုဖရဲ ပြုတတ်သော မိန်းမကိုလည်းကောင်း၊
ထိုသို့သဘောရှိသော ယောင်္ကျားကိုလည်းကောင်း အိမ်ထောင်ထိန်းအရာ၌ ထား၏။
ထိုသူ၏ ထိုအကြောင်းသည် ပျက်စီးဆုတ်ယုတ်ကြောင်းတည်း။
၂၄။ အကြင်သူသည် ဥစ္စာနည်း၍ ပစ္စည်းဥစ္စာတို့၌ တပ်မက်မှု ကြီးမား၏။
မင်းမျိုး၌လည်းဖြစ်၏။ ထိုသူသည်ကား မင်းအဖြစ်ကို တောင့်တ၏။ ထိုသူ၏
Posted by Oasisthetoo at 3:44 PM No comments: Links to this post
၁။ မိမိ အကျိုးသာကျင့်၍ သူတစ်ပါးအကျိုးကို မကျင့်သူ။
၂။ သူတစ်ပါးအကျိုးကိုသာကျင့်၍ မိမိအကျိုးကို မကျင့်သူ။
၃။ မိမိ သူတစ်ပါး နှစ်ဦးသားတို့ရဲ့ အကျိုးကို မကျင့်သူ။
၄။ မိမိ သူတစ်ပါး နှစ်ဦးသားလုံးရဲ့ အကျိုးကို ကျင့်သူဟု
ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးရှိပါတယ်။ ယင်း ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးတွင် နောက်ဆုံး
ကျမ်းကိုး= ပုဂ္ဂလပညတ္တိပါဠိ-၁၀၉၊ အင်္ဂုတ္တိုရ်၊ စတုက္က(၄၀၇
၁။ လက်သစ်တောင်တာ၊ ယူဇနာပေါင်း၊ တာပြန်လောင်းသော်၊ ရှစ်သောင်းလေးထောင်၊ အမြင့်ဆောင်ထား၊ တောင်မြင်းမိုရ်ရှိ၊ ဂုဏ်ကြီးဘိသည်၊ မွေးမိဘခင်၊ ကျေးဇူးရှင်နှင့်၊ ထို့ပြင်တခြား၊ ဘိုးနှင့်ဘွားကို၊ ဘုရားတစ်ဆူ၊ ဂူတစ်လုံးသွင်၊ စိတ်ကထင်လျက်၊ ဦးတင်လက်ထား၊ အစားအ၀တ်၊ မလွတ်ရစေ၊ ရေပူရေအေး၊ လိုရာပေး၍ မွေးကျွေးကြပေ၊ တစ်ထွေမှတ်သား၊ အခါးအချို၊ သူတို့ဆိုလည်း၊ ဘိုးဘွားမိဘ၊ ဆရာစသည်၊ ပြသဆိုထွေ မျိုတတ်စေ။
၂။ အစ်ကိုကြီးအား၊ ညီငယ်များလည်း၊ စကားနှုတ်ဆက်၊ ဖက်၍မဆို၊ ရိုသေလှစေ၊ ကိုကြီးအစ်မ၊ သည်နှစ်ဝကို၊ မိဘကဲ့သို့ မှတ်ပါလေ။
၃။ ဆွေကြီးမျိုးကြီး၊ အဘကြီးနှင့်၊ ဦးရီးသားချင်း၊ ဘထွေးရင်းက၊ ဟူသမျှကို၊ ဂုဏ၀ုဎ၊ ပစာယန၊ စိတ်ကသိစေ၊ ပြစ်မှားမိက မသင့်ချေ။
၄။ ပေါက်ဖော်သားချင်း၊ တစ်ဝမ်းတွင်းမှ အရင်းအနှစ်၊ ဖွေစိစစ်၍၊ အပြစ်စုပုံ၊ မခြားထုံသည်၊ အူတုံဖြစ်က ချစ်ကြလေ။
၅။ သေတူရှင်ဖက်၊ ဆောင်ရွက်မကင်း၊ အချင်းချင်းတွင်၊ အခင်းကြီးငယ်၊ ရှိခါဝယ်လည်း၊ မဖယ်မသွေ၊ ညီညာကုန်း၍၊ ရုန်းကြလေ။
၆။ ရှေးကစွန့်ကြဲ၊ ကံရင်းနဲ၍၊ ဆင်းရဲခဲ့တုံ၊ ကိုယ်မလုံ၍၊ သူ့ဂုဏ်ပိုင်ပိုင်၊ မဆပ်နိုင်သော်၊ ကိုယ်တိုင်သူ့အိမ်၊ ရောက်ခိုက်ကြိမ်က၊ မထိမ်မမြူး၊ ဘ-ရာဖူးသို့၊ ကျေးဇူးရှိထွေ၊ သိတတ်စေ။
၇။ တစ်ယောက်စကား၊ တစ်ယောက်နားမှာ၊ မခါးရအောင်၊ သတိဆောင်၍၊ မောင်တို့ဆိုလေ၊ ပျားသကာသို့ ချိုလှစေ။
၈။ မတွေ့ခိုက်ရန်၊ မကျုးလွန်နှင့်၊ မျက်မာန်ဒေါသ၊ မထွက်ရအောင်၊ မာန်မာနကို ချုပ်ကြလေ။
၉။ သေနှင့်အရက်၊ စီးပွားဖျက်ကို၊ တစ်စက်ကယ်မျှ၊ မသောက်ကြနှင့်၊ ရှောင်ကြပါလေ၊ ရှင်တော်ဟောသည့် အဆိပ်ရေ။
၁၀။ ကိုယ်နှင့်လည်းစာ၊ သတ္တ၀ါကို၊ ကြင်နာလှစေ၊ သူ့အသက်ကို ချစ်ပါလေ။
၁၁။ သူ၏ဥစ္စာ၊ သူ့ဘဏ္ဍာကို၊ မေတ္တာမရှေး၊ သူမပေးက၊ ဆေးတစ်အိုးမျှ၊ မယူကြနှင့်၊ ရှောင်ကြပါလေ။
Posted by Oasisthetoo at 3:51 PM No comments: Links to this post
ရခိုင်၏သမိုင်းကို နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာအသေးစိတ် သုတေသနပြုကာလေ့လာခဲ့သူ
် Dr,Jacques Leider မှဆက်လက်ပြောကြားသည်မှာ
ရိုဟင်ဂျာမှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ပါကြောင်း...............။
ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်များနဲပတ်
သတ်ပြီး Concept မရှိပါဘူးတဲ့။ သူတို့တွေအနေနဲ့မတ်တပ်ရပ်ပြီးတော့ သူတို့ဟာမြန်
မာတိုင်းရင်းသားပါလို့ ကြွေးကြော်လို့တော့ မရနိုင်ပါဘူး။
ပြီးတော့ ဒီလိုအော်နေတာက အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါ
တယ်။ သူတို့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်မှာမျိုးဆက်တခုမက နေထိုင်လာကြတဲ့မူစလင်တွေ
ပါလို့ပြောရင်တော့ငြင်းဖို့ခက်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာဝေါဟာရတစ်ခုပါ။ ရှေးဟောင်း
စကားလုံး တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီး နောက်ပိုင်းရောက်မှ ဒါကို
အခုအချိန်အထိတော့ သူတို့အားလုံးဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက မူစလင်တွေအားလုံး
အနေနဲ့အဲဒီနိုင်ငံရေး ခေါင်းစဉ်တစ်ခု၏အောက်မှာ အကျုံးဝင်ဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ရောက်ခဲ့စဉ်တုန်းက ရခိုင်ပြည်ကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို
ကူးလာတဲ့ မူစလင်တွေအားလုံးကို ခင်ဗျားတိုဟာ ရခိုင်ပြည်ကလာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလားလို့ 
မေးကြည့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ။ သူတို့ကပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကရိုဟင်ဂျာမဟုတ်ပါဘူး
ကျွန်တော်တို့က ရခိုင်ပြည်မှာ နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ဘင်္ဂလီလူမျိုးမွတ်စ်ဆလင်တွေဟုဆိုကြ
ကျွန်တော်တို့ကို ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စတေးတပ်ကာ ကပ်ပေးလို့မရပါဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Q: Are the Rohingya an ethnic group of Burma?
A: My answer is that Rohingya is not an ethnic concept. Okay, they can stand
up and say we are an ethnic group inside Myanmar.But I think that is not the
best way. When you argue we are Muslims and we have been living in Ranki
ne for several generations, nobody can deny it. For me,Rohingya is the term,
which is an old word that has been claimed as above all asapolitical label >
after the independence of Myanmar.For the moment,I do not see that all the
people there readily submit to one andasingle label. When I was in Banglad
-esh, people pointed out Muslims to me who originally lived in Rankine. They
have now moved to Bangladesh and when you ask them, “ are you Rohingya
coming from Rankine?” they say, “no, we are Muslims who live in Rankine,
we do not take for us the label Rohingya.”
ရိုဟင်ဟူသည့်ဝေါဟာရသည် (China ကို တရုတ်ဟု မြန်မာတို့ ကခေါ်ကြသကဲ့သို)ရခိုင်
ခြင်းသာဖြစ်ပြီး ဆင့်ပွားဝေါဟာရဖြစ်သော ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်သားဟု အဓိ
ပ္ပါယ်ရကြောင်း နောက်ပိုင်းမှ ရခိုင်လူမျိုးတို့ သိခဲ့ကြရလေသည်။
ရခိုင်ပြည်သားဆိုသည့် အဆိုပါ(ဝေါဟာရသည်)ရခိုင်ပြည်သား(သို့) ရခိုင်လူမျိုးများနှင့်
သာသက်ဆိုင်နေပြီး ၁၉၅၀ - ခုနှစ်၊ နောက်ပိုင်းကာလမှ ရခိုင်ပြည်အတွင်းသို့ဘင်္ဂလား
ဒေ့ရ်ှများမှခိုးဝင်လာသူ ဘင်္ဂလီများနှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိပါကြောင်း သိရှိရလေသည်။
၁၉၅၀ - ခုနှစ်၊နောက်ပိုင်းတွင်နည်းအမျိုးမျိုးတို့ ဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဒ်နိုင်ငံမှခိုးဝင်လာသူ
ဘင်္ဂလီလူမျိုးတိုနှင့် မူရင်းနေ(ပသီတို့ )ရောနှောကာ နေထိုင်လာကြရာမှ လူဦးရေအစမ
တန် တိုးပွားလာခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်။
စင်စစ်ဆိုရသော်ယခင်ကရှိခဲ့ပြီးသော ပြည်တွင်းနေမွတ်ဆင်လူမျိုးတို့ ၏ အဆိုပါလူမသိ
လူမသိ (ရိုဟင်ဆိုသည့်ဝေါဟာရကို)အကြောင်းပြုပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုခြေကုတ်ယူ၍ထို
မှစတင်၍မြန်မာနိုင်ငံကို အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံ ထူထောင်နိုင်ရန်အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစ
တင်ကာ အပိုင်သိမ်းဖို့ ရန် (ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်) လှုပ်ရှားလာခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။
ရိုဟင်ဆိုသည့်ဝေါဟာရကို ပညာမတောက်တခေါက်တတ်သူ (ဘင်္ဂလီ)များကနှစ်ပေါက်
တစ်ပေါက်ရိုက်ကာ လှည့်စားဖို့ ရန် ရည်ရွယ်၍အသုံးပြုကြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ နိဂုံးချုပ်
ရသော် (ဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟူသည့်မှာ) ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဒ်နိုင်ငံမှ ခိုးဝင်လာသူဘင်္ဂလီ
လူမျိုးတို့ ၏ ပြည်တွင်းနေမွတ်စ်လင်လူမျိုးတို့ ပူးပေါင်းကာ (အစ္စလာမ်ဥပဒေအရ)မြန်
မာနိုင်ငံအား အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံ ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးကစားကွက်တစ်ခုမျှ
ပင်ဖြစ်သည်ဟု ရခိုင်သမိုင်းအားနှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာမျှ အသေးစိတ် သုတေသနပြု
ကာလေ့လာခဲ့သူဖြစ်သည့် (ပြင်သစ်နိုင်ငံသားသမိုင်းပညာရှင်) Dr,Jacques Leider ဆို
သူမှ သူဤသို့ ကောက်ချက်ချကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံသား သမိုင်းပညာရှင် (Dr, Jacques Leider)
Posted by Oasisthetoo at 4:14 PM No comments: Links to this post
နောင်တ ဆယ်ပါး ကြိုသိထားသင့်
* ငယ်ခါကလျင် မသင်ပညာ
* ဥစ္စာ မစု
* သူ့ သက်သတ်စား
* သူ့ မယား၌ ပြစ်မှားတုံဘိ
* ပစ္စည်းရှိလျက် စိုးစိ မလှူ
* ဆုံးမ မနာ
* ပညာရှိထံ နည်းခံ မမှတ်
* အမြတ်မကျင့် ၊
ဤဆယ်ဆင့်ကား၊ ကြီးရင့်ဇရာ၊ အိုသောခါလျင်၊
ပြုမည်ကြံလဲ၊ သင့်စိတ်ထဲ၊ အမြဲဆင်ခြင်ပါ။
မိမိ သူတပါး၊ နှစ်ဦးသား၊ ဘယ်သူ့များ ထိမည်လဲ။
ထိခိုက်နိုင်ငြား၊ အပြုများ၊ မမှားရှောင်ကြဉ်ပါ။
ပြုဆဲမှာလဲ၊ သင့်စိတ်ထဲ၊ အမြဲဆင်ခြင်ပါ။
မိမိ သူတပါး၊ နှစ်ဦးသား၊ ဘယ်သူ့များ ထိသလဲ။
ထိခိုက်နိုင်ငြား၊ အပြုများ၊ မမှားရှောင်ကြဉ်ပါ။
ပြုပြီးပြန်လဲ၊ သင့်စိတ်ထဲ၊ အမြဲဆင်ခြင်ပါ။
မိမိ သူတပါး၊ နှစ်ဦးသား၊ ဘယ်သူ့များ ထိပြီလဲ။
ပြောမည်ကြံလဲ၊ သင့်စိတ်ထဲ၊ အမြဲဆင်ခြင်ပါ။
ထိခိုက်နိုင်ငြား၊ အပြောများ၊ မမှားရှောင်ကြဉ်ပါ။
ပြောဆဲမှာလဲ၊ သင့်စိတ်ထဲ၊ အမြဲဆင်ခြင်ပါ။
ထိခိုက်နိုင်ငြား၊ အပြောများ၊ မမှားရှောင်ကြဉ်ပါ။
ပြောပြီးပြန်လဲ၊ သင့်စိတ်ထဲ၊ အမြဲဆင်ခြင်ပါ။
တွေးမည်ကြံလဲ၊ သင့်စိတ်ထဲ၊ အမြဲဆင်ခြင်ပါ။
ထိခိုက်နိုင်ငြား၊ အတွေးများ၊ မမှားရှောင်ကြဉ်ပါ။
တွေးဆဲမှာလဲ၊ သင့်စိတ်ထဲ၊ အမြဲဆင်ခြင်ပါ။
ထိခိုက်နိုင်ငြား၊ အတွေးများ၊ မမှားရှောင်ကြဉ်ပါ။
တွေးပြီးပြန်လဲ၊ သင့်စိတ်ထဲ၊ အမြဲဆင်ခြင်ပါ။
ချမ်းမြေ့ဆရာတော် (ဓမ္မကဗျာပဒေသာ စာအုပ်မှ)
Posted by Oasisthetoo at 3:38 PM No comments: Links to this post
မယုတ်အကျိုး၊ မညှိုးစင်စစ်၊ ပွားကြောင်းဖြစ်၏”
Posted by Oasisthetoo at 3:49 PM No comments: Links to this post
အသက် ၄၅ နှစ် အရွယ်ရှိ ကျောင်းဆရာဖြစ်သူ ပေါလ်ဟာ အရေပြား ကင်ဆာရောဂါနဲ့ သူ မကြာမီ လူ့လောကမှ စွန့်ခွာရတော့မှန်း သိပြီးနောက် လူလား မမြောက်သေးတဲ့ ၅ နှစ်နဲ့ ၁ နှစ်ခွဲ အရွယ်ကလေးငယ်များ နောင်တချိန် အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ ဖတ်ဖို့ စနစ်တကျ ရေးသားပြုစုထားပါတယ်။ စာဖတ်သူတို့လည်း မှတ်သားလိုက်နာ ကျင့်ကြံကြပါစို့လား။
၁။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပါ။ အချိန်တိကျပါ။ ကျေှးဇူးပြု၍၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတာကို အမြဲတမ်း ထည့်ပြောပါ။
၂။ သင်ကိုယ်တိုင်ပြဿနာ ရှိသော်လည်း တခြားသူ ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါ ထောက်ထားညှာတာပါ။ ကရုဏာထားပါ။ အချိန်တန်တဲ့အခါ သင့်ရဲ့  ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံမှုကို လေးစား အံ့သြပြီး သင့်ကို ကူညီလာပါလိမ့်မယ်။
၃။ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို အားထုတ်ကျင့်ကြံပါ။ သင့်အတွက် မထင်ပေါ်သော်ငြား မှန်တယ်ထင်ရင် လုပ်ပါ။ မနက်တိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာအပြစ်မှမကျုးလွန်ပါ (သို့) ကိုယ်လုပ်ခဲ့သမျှကို နောင်တမရပါဆိုတဲ့ အကောင်းအဆိုး ခွဲခြားသိတဲ့ စိတ်နဲ့ မှန်ကြည့်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
၄။ မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချပါ။ မိမိရဲ့အယူအဆ၊ နေရာကို မပြောင်းလဲဘဲ မနေဘဲ တဖက်သား ပြောတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး မိမိမှားမှန်း သိရင် ရပ်တန်းက ရပ်ပြီး နောက်ပြန်ဆုတ်ပါ။ အရိုအသေတန်မှာ အရှက်ရမှာ မစိုးရိမ်နဲ့။ သင်ဟာ တယူသန် ခေါင်းမာတဲ့သူ မဖြစ်ပါစေနဲ့။
၅။ သင့်အမှားများစွာမှ သင်ယူနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ သင်ဟာ ပြဿနာတခုခုနဲ့ ကြုံလာတိုင်း ဆက်ပြီး တူညီတဲ့ အမှားမျိုး လုပ်မယ်ဆိုရင် သင်ဟာတခုခုတော့ မှားနေပြီ။
၆။ သူတပါးအား မထီမဲ့မြင် မလေးမစား ပြုမူ မဆက်ဆံပါနဲ့။ မိမိအတွက်လည်း မကောင်းပါ။ ပြဿနာ တခုခုရှိရင် မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
၇။ ရန်စကို ထိန်းချုပ်ပါ။ တစုံတယောက်က ကိုယ့်ကို ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်လာရင်လည်း ချက်ချင်း မတုန့်ပြန်ပါနဲ့။ ဒေါသထွက်ရင် စကားထဲက အမှား ပါလာတတ်ပါတယ်။ သည်းခံခြင်းက ကိုယ့်အတွက် ထိုက်တန်တဲ့ အခွင့်အရေး ရလာပါလိမ့်မယ်။
၈။ ပျော်ပျော်နေပါ။ မိမိထက် နိမ့်ကျပြီး ကံမကောင်း အကြောင်းမလှတဲ့ သူများကို ပေးကမ်း ရက်ရော ကူညီပါ။ ဒါဟာ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်ပြီး မိမိအတွက် ခက်ခဲတာလည်းမဟုတ်။
၉။ အမြဲတမ်း အကောင်းမြင်တတ်ပါစေ။ ဥပမာ- ဖန်ခွက်ထဲကရေဟာ တဝက်ပြည့်နေတာ။ တဝက်မရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ ကံဆိုးမှုတိုင်းကို ရှာဖွေသင်ခန်းစာယူတတ်ရင် ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးရလဒ်ကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ တခုခုကို လုပ်ဖို့ အကျိုးအကြောင်း ရှာဖွေပါ။ အမြဲတမ်း "YES" ဆိုတာ ပြောဖို့ အသိစိတ် မွေးရပါမယ်။ "NO" ပြောဖို့ မကြံပါနဲ့။ အဲဒီအတွက် သင့်မိတ်ဆွေဟာ သင့်ကိုချစ်ခင်လာပါလိမ့်မယ်။
၁၁။ သူများနဲ့ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် တိုင်ပင် ညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့် သူတို့အကြိုက်ကို ပို၍ သင် လိုက်လျောပေးနိုင်ရင် သင်လည်း လိုအပ်တာထက် ပိုမို ရရှိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၂။ အဖွဲ့အစည်း၊ ပါတီဖိတ်ကြားခြင်းကို ယဉ်ကျေးပျူငှာစွာ လေးစား ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ အမြဲတမ်း လက်ခံတက်ရောက်ပါ။
၁၃။ မိမိထက် အဆင့်အတန်း၊ ရာထူး နိမ့်ကျသည်ဖြစ်စေ၊ မြင့်မားသည်ဖြစ်စေ အမြဲတမ်း တန်းတူ ဆက်ဆံရပါမယ်။ သင့်ထက် ဝါကြီးသူကို ရိုသေ ကိုင်းရှိုင်းရပါမယ်။ ဖော်လံဖားသူ မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ရွယ်တူကို လေးစားပါ။
၁၄။ သင့်မောင်နှမ သားချင်းများရဲ့ အကြိုက်ကို ဦးစားပေးပါ။ မိမိကိုယ်ကိုနဲ့ မိမိနိုင်ငံကို ဂုဏ်ယူမြတ်နိုးပါ။ တခြား တိုင်းပြည်ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဘာသာစကားများကိုလည်း လေ့လာပါ။ သင်တခြား တိုင်းပြည်သို့ ခရီးသွားတဲ့အခါမှာ မိမိတိုင်းပြည်ဟာ ကမ္ဘာမှာ ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်၊ မပါဘူး ဆိုတာကို သိလာပါလိမ့်မယ်။ သိပ်ပြီး သွေးကြီးပြီး ဘဝင်မမြင့်ပါနဲ့။
၁၅။ ရည်မှန်းချက် ကြီးကြီးထားပါ။ မိမိ တတ်ကျွမ်းတဲ့ပညာနဲ့ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပြီး အခွင့်အရေးကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဆုပ်ကိုင်ပါ။
၁၆။ နေ့စဉ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ပါ။ အချိန် မဆွဲပါနဲ့။
၁၇။ ကျောင်းမှာ အတော်ဆုံး ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ ဆရာ၊ ဆရာမများ သင်ကြားတာအပြင် မိမိကိုယ်ကို တီထွင်ကြံဆပါ။
၁၈။ သင်တတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာအထိ သုံးစွဲပါ။ အလွန်အမင်းလည်း ခြိုးခြံ မချွေတာပါနဲ့။ သူ့ ဈေးနှုန်းနဲ့တန်တဲ့ ပစ္စည်းမျိုးရှာဖွေဝယ်ယူပါ။
၁၉။ ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးပါနဲ့။ ဖခင်မရှိပေမဲ့ သတ္တိရှိပါ။ ကြင်နာရက်ရောပါ။ ကျန်းမာ သန်စွမ်းအောင် နေပါ။ မိမိ ကံကြမ္မာကို ကောင်းအောင်ဖန်တီးပါ။
၂၀။ မိမိကိုယ်ကို ဘယ်တော့မှ ဝမ်းနည်း အားငယ်မနေပါနဲ့။ ငိုယိုခြင်းကနေ ဘာမှကောင်းတာ ဖြစ်မလာဘူး။
၂၂။ ဘာသာစကားတခုခုကို လေ့လာသင်ယူ လိုက်စားပါ။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတကာသုံး အင်္ဂင်္လိပ်စာကို ကျွမ်းကျင်အောင် ပြုလုပ်ပါ။
၂၃။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သင့်မိခင်ကို သေချာ ဂရုစိုက်ပါ။ ချစ်ခင်ကြင်နာ ယုယပါ။
Published on Friday, 25 January 2013 03:39
Written by Maukkha
Posted by Oasisthetoo at 4:58 PM No comments: Links to this post
ယောက်ျားမှာ ဆီး၊ မိန်းမမှာ မီး-လို့ ဆိုရိုးစကား ရှိပါတယ်။
စာရေးသူတို့ ယောက်ျားတွေ တော်တော်များများ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဝေဒနာတမျိုးပါ။ စာရေးသူဟာ မကြာခဏ ဆီးနည်း၊ ဆီးအောင့်၊ ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဆီးအောင့်ပါများပြီး ကပ်ပယ်အိတ်ပါ ရောင်လာတတ်ပါတယ်။ လက်သီးဆုတ်လောက်အထိ ရောင်လာပြီး ထိုင်ထ လမ်းလျှောက်ရင် အောင့်ပြီး ခံရခက်တာကို ဖြစ်ဖူးသူတိုင်း သိကြမှာပါ။ အလေးအပင် မ,မိရင်လဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တနေ့မှာ စာရေးသူလဲ ကပ်ပယ်အိတ်ပါရောင်ပြီး လမ်းတောင် မလျှောက်နိုင်ပါဘူး။ ဆေးထိုးတော့လဲ သက်သာပေမယ့် အရောင်က မကျဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တနေ့မှာ (ကိုကြည်နိုင်)ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေနဲ့ တွေ့တုန်း သူဖြစ်တုန်းက ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား မိတ်ဆွေပြောတဲ့ ဆေးမြီးတိုနည်းကြောင့် သက်သာ ပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့နည်းကို ပြောပြပါတယ်။
စာရေးသူလဲ သူပြောတဲ့နည်းလေးကို သုံးကြည်တာ သက်သာပျောက်ကင်းခဲ့လို့ အခု တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
* သင်္ဘောရွက် အကြမ်းရွက်ကို မီးနဲ့ ကျွမ်းအောင်ကင်ပြီး ရေနွေးဖြူ ပူပူထဲ ခြွေထည့်ပြီး
ရေနွေးကြမ်းသောက်ပန်းကန် နှစ်လုံးစာလောက်ကို တနေ့ သုံးကြိမ် သောက်ပေးရပါတယ်။
ခါးလွန်းခြင်း မရှိဘဲ သောက်လို့ ကောင်းပါတယ်။
သင်္ဘောရွက် အနုကိုတော့ မီးအုံးကင်ပြီး ထမင်းစားတဲ့အခါ တို့စရာလို စားပေးရပါတယ်။
၂-ရက်လောက် စားပြီးတဲ့အခါ သက်သာလာပါတယ်။ ၅-ရက်လောက် သုံးပြီးတော့ သက်သာပျောက်ကင်းသွားပါတယ်။
Posted by Oasisthetoo at 11:01 PM No comments: Links to this post
အနိစ္စ, ဒုက္ခ, အနတ္တ, လက္ခဏာရေး ၃-ပါး
အိုအိုလူများ, သတိထားလော့, သွားဆဲကာလ, ခါသမယဝယ်, ပထမခြေလှမ်း, ရုပ်နာမ်တန်းတို့, လှမ်း ဒုတိယ, မရောက်ကြဘူး၊
ဒုတိယလှမ်း, ရုပ်နာမ်တန်းလည်း, လှမ်း တတိယ, မရောက်ကြပင်၊
တစ်လှမ်းတွင်လည်း, မြှောက်စဉ်တစ်မျိုး, ရှေ့တိုးတစ်ဖုံ, လွန်ပုံတစ်ဝ, အောက်ချတစ်ခင်း, ထိခြင်းတလွေ့, ဖိနင်းစေ့အောင်, တရွေ့ရွေ့မြန်း, အခန်းခန်း၌, ခြေလှမ်းပိုင်းခြား, စိတ်ခြောက်ပါးဝယ်, သွယ်သွယ်နာမ်တန်း, ရုပ်အတန်းတို့, နှမ်းအိုးခင်းထက်, နှမ်းတွေကျက်သို့, ဖြစ်ပျက်နေရ, အနိစ္စသည်, ဒုက္ခ-အနတ္တချည်းသာတည်း။
Posted by Oasisthetoo at 10:43 PM No comments: Links to this post
အမိဝမ်းခေါင်း, ဆယ်လညောင်းမျှ, အောင်းခဲ့ရချေ, တည်သန္ဓေနှင့်, လူ့ပြေလူ့ရွာ, ရောက်ပြန်ပါလည်း, အို နာ သေရေး, ဒုက္ခဘေးကြောင့်, စိတ်အေးကိုယ်ခိုင်, မနေနိုင်ခဲ့, ဆိုင်ဆိုင်ဒုက္ခ, ခံပြီးမှလည်း, များလှပါယ်ရွာ, ရောက်ကြရှာ၏။
အတီတာရှေး, ဤဝဋ်ဘေးနှင့်, နောင်ရေး နာဂါတ်, ဒုက္ခထပ်လိမ့်, မပြတ်ခုခါ, ဖြစ်တုံးမှာလည်း, အစာရှာရ, ထိုဒုက္ခကြောင့်, နေ့ညမဟူ, ကိုယ်စိတ်ပူ၍, သူသူငါငါ, မသက်သာသည်, ရှစ်ဖြာသံဝေ ရကြောင်းတည်း။
Posted by Oasisthetoo at 10:20 PM No comments: Links to this post
(ဘုရားရှင် ပွင့်တော်မူရခြင်း၏ ရလာဘ်)
ဘုရားရှင်တော်, မပွင့်ပေါ်လျှင်, လူတော်အများ, စိတ်ကောင်းထားလည်း, ဤကားကုသိုလ်, အကိုသလ်နှင့်, ထိုထိုဘုံဘဝ, မသိရ, များလှ အပြစ်တွေ။
ဘုရားရှင်တော်, ပွင့်ထွန်းပေါ်၍, ဟောဖော်ညွှန်ကြား, မြတ်တရားကြောင့်, ဤကားကုသိုလ်, အကုသိုလ်နှင့်, ထိုထိုဘုံဘဝ, သိကြရ, များလှ ကျေးဇူးတွေ။
ကျေးဇူးတော်ရင်, ဘုရားရှင်ကို, နေ့စဉ်မပြတ်, ကျေးဇူးဆပ်ဖို့, အမြတ်ရတနာ, သာသနာ၏, နှစ်ဖြာဝန်ထမ်း, လွန်ကြိုးပမ်း, လူစွမ်း ပြကြစေ။
Posted by Oasisthetoo at 9:54 PM No comments: Links to this post
မြတ်ဗုဒ္ဓမိန့်တော်မူခဲ့သော သံဃာတော်များ လူထွက်ရခြင်းအကြောင်း(၄)ချက်
အရှင်ဘုရား သံဃာတော်တွေ လူထွက်သွားကြတာ ဘာကြောင့်ပါလဲလို့ ခဏခဏ လာမေးနေကြတဲ့သူတွေအတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓမိန့်တော်မူခဲ့တာကို ဦးဇင်းဒေါက်တာကျမ်းစာအတွက် ရဟန်းတော်များနဲ့ဆိုင်ရာ ရှာဖွေရင်း ကျမ်းအထောက်အထားပါ တွေ့ရှိတာနဲ့ ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ရဟန်းနဲ့ဆိုင်ရာများ ဆိုဆုံးမသည်ကို မလိုက်နာနိုင်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊
၂။ စားချင်၊ ၀တ်ချင်၊ သုံးဆောင်ချင်တာများမရဘဲ မစားချင်၊ မ၀တ်ချင်၊ မသုံးဆောင်ချင်တာများ သုံးဆောင်ရလို့လည်းကောင်း။
၃။ သူများ ကာမဂုဏ်ငါးပါးခံစားသည်ကိုမြင်ပြီး ခံစားချင်စိတ်ဖြစ်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊
၄။ လုံခြုံစွာ ၀တ်ဆင်မထားသော မိန်းမတွေမြင်ပြီး ကာမစိတ် မထိန်းနိုင်လို့လည်းကောင်း သာသနာဘောင်မှ လူ့ဘောင်သို့ ကူးပြောင်းသွားကြရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ (မဇ္ဈိမပဏ္ဏာသပါဠိတော်၊ ဘိက္ခုဝဂ်၊ စာတုမသုတ်၊ (မ၊ ၂၊ ၁၁၉)
Posted by Oasisthetoo at 8:37 AM No comments: Links to this post
Posted by Oasisthetoo at 8:06 AM No comments: Links to this post
- ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနောက် ဘုရားရှင်၏ တရားတော်များ မပျက်စီး မပျောက်ပျက်ရလေအောင် ဘုရားရှင်၏ တရားဓမ္မများအား ကျွမ်းကျင် တတ်ကျွမ်းသော သံဃာတော်များ စုပေါင်းပြီး ဗုဒ္ဓ၏ဓမ္မအား သန့်ရှင်းတည်တံ့ပြန့်ပွားနိုင်ရန်အတွက် စစ်မှန်သော ဓမ္မကိုသာ သံဃာများ၏ သဘောတူညီမှုရယူကာ ရွတ်ဖတ်မှတ်တမ်းတင် အတည်ပြုကြခြင်းကို သင်္ဂါယနာတင်ခြင်း ဟုခေါ်သည်။ မင်းထုနှင့်ပြည်သူလူထုမှ ပံ့ပိုးကူညီကြသည်။
- ဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနောက် ဘုရားရှင်၏ တပည့်ရဟန်းတို့သည် ခေတ်အသီးသီးမှ အာဏာရှိသော မင်းထုနှင့် ဗုဒ္ဓသာသနာဝင် ပြည်သူလူ ထုပူးပေါင်းပြီး သံဃာထု၊ မင်းထု၊ ပြည်သူလူထု၊ ထု(၃)ထု ပူးပေါင်း ကာ သင်္ဂါယနာ (၆)ကြိမ်တိုင်တိုင် စုပေါင်းတင်ခဲ့ကြပြီး ဗုဒ္ဓသာသနာ့အမွေ မပျက်စီးမပျောက်ပျက်ရလေ အောင် စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြလေသဘည်။
သုဘဒ္ဒဟုခေါ်သော ရဟန်းသည် ဘုရားရှိစဉ်ကတည်းက ၀ိနည်း(စည်းကမ်း)အား အကြိမ်ကြိမ်ဖောက် ပြန်ခဲ့သဖြင့် ဘုရားရှင်၏ အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးမှုကို ခံခဲ့ရသဖြင့် ဘုရားရှင်အား အညှိုးထားခဲ့ရာမှ ဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသည်နှင့် လွတ်လပ်ပြီဆိုပြီး ကြွေးကြော်ကာ သာသနာအား ညှိုးနွမ်း အောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို အကြောင်းပြုပြီး တင်ခဲ့သည်။
ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး (၃)လ နှင့် (၄)ရက်
ရာဇဂြိုလ်ပြည် ဝေဘာရတောင် သတ္တပဏ္ဏိလိုဏ်ဂူ
အရှင်မဟာကဿပမထေရ် ဦးဆောင်သော အရှင်ဥပါလိ(၀ိနည်း)နှင့် ညီတော်အာနန္ဒာ (သုတ္တန်နှင့် အဘိဓမ္မာ)
- သုဘဒ္ဒရဟန်းအားအကြောင်းပြုပြီး အရှင်မဟာကဿပမထေရ်မှ ဦးဆောင်ပြီး အရှင်ဥပါလိမှ ၀ိနည်း တော်ကို၎င်း ညီတော်အာနန္ဒာမှ သုတ္တန်နှင့် အဘိဓမ္မာ ကို၎င်း သံဃာအစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းခဲ့သည်။
- ဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့သော ဓမ္မသည် လွန်စွာများပြားလှသဖြင့် တရားအစုအဖွဲ့အသေးများ စုဖွဲ့ခြင်းကို ဓမ္မက္ခန္ဓာဖွဲ့ခြင်းဖြင့် ဓမ္မက္ခန္ဓာပေါင်း စုစုပေါင်း(၈၄၀၀၀)ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းင်းကို ထပ်မံပြီး သဘောတရားတူရာ အလိုက် အုပ်စုဖွဲ့လိုက်ရာ အုပ်စု(၃)စု ရရှိပြီး ပိဋကတ်(၃)ပုံဟု ခေါ်တွင်သည်။
- ၎င်းပိဋကတ် (၃)ပုံမှာ ၀ိနည်းပိဋကတ်တွင် ဓမ္မက္ခန္ဓာ (၂၁၀၀၀)၊ သုတ္တန် ပိဋကတ်တွင် ဓမ္မက္ခန္ဓာ (၂၁၀၀၀)၊ အဘိဓမ္မာပိဋကတ်တွင် ဓမ္မက္ခန္ဓာ (၄၂၀၀၀) ထည့်သွင်းကာ သဘောတူခဲ့ကြသည်။
- အစည်းအဝေး တက်ရောက်ကြသော ရဟန္တာများသည် ဘုရားရှင်အား မီခဲ့ကြပြီး အနီးကပ်ဆုံးတရားတော် များ နာကြားသင်ယူခဲ့ရသည့် ပဋိသမ္ဘိဒါပတ္တ တန်ခိုးကြီးမား ပြီး စင်ကြယ်လှသော ရဟန္တာကြီးများ ဖြစ်ကြသည်။
- ပထမအကြိမ် သင်္ဂါယနာတင်ခြင်းကို နှုတ်(ပါးစပ်)ပေါ်မှာသာ တင်ခဲ့ကြပြီး သံဃာအစည်းအဝေးတွင် ပိဋကတ်(၃)ပုံ စတင်သတ်မှတ် စီစဉ်ခဲ့ကြစဉ် ဘုရားရှင် ဟောကြားခဲ့သော တရားတော်များ အကုန်လုံး ပြည့်စုံမှု ဖြစ်မဖြစ် (လိုနေလို့ ထပ်ဖြည့်ရန်၎င်း၊ ပိုနေလို့ နုတ်ပယ်ရန်၎င်း)ကို စိစစ်ခဲ့ကြရာ အားလုံးမှ ပြည့်စုံပြီဖြစ်ကြောင်း တညီတညွတ်တည်းသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
- ဘုရားရှင်၏ဓမ္မကို မူရင်းအတိုင်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီး လိုတိုးပိုလျော့ လုံးဝလုပ်ခွင့်မရှိ သံဃာတော်များမှ ထေရ်စဉ်ဝါစဉ်အလိုက် စောင့်ရှောက် ကြပါစို့ဟု သဘောတူညီမှုယူခဲ့ပြီး ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာ ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပေသည်။
သာသနာနှစ် (၁၀၀)ကြာပြီးနောက် ၀ဇ္ဇီတိုင်းသားရဟန်းများ (ဒေ၀ဒတ်၏တပည့်များ)မှ အဓမ္မ၀တ္ထု (၁၀)ပါးကို တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ဥပမာ နေလက်တစ်သစ်လွဲသည်အထိ ထမင်းစားရန်၎င်း၊ သေနု(အရက်ခပ် ပျော့ပျော့)ကို သောက်ရန်၎င်းင်း၊ ရွှေငွေများကို သာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်များကဲ့သို့ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရန်၎င်းစသဖြင့် တောင်းဆိုခဲ့သည်မှာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်အား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်လာသဖြင့် သာသနာညှိုးနွမ်း လာသည်ကို အကြောင်းပြုပြီး တင်ခဲ့သည်။
အရှင်ယသမထေရ် ဦးဆောင်သော အရှင်ရေ၀တနှင့် အရှင်သဗ္ဗကာမိ
- ၀ဇ္ဇီတိုင်းသားရဟန်းပျက်များကို အကြောင်းပြုပြီး အရှင်ယသမထေရ်မှ ဦးဆောင်ပြီး အရှင်ရေ၀တနှင့် အရှင်သဗ္ဗကာမိနှစ်ပါးမှ အမေးအဖြေများ ပြုလုပ်စိစစ်ခဲ့ကြပြီး နှုတ်ထက်အက္ခရာတင်ခဲ့ကြရာ (၈)လ ကြာမြင့် ခဲ့သည်။ ရဟန္တာ(၇၀၀)သော သံဃာထု ကာလာသောကမင်း၏ မင်းထုနှင့် ပြည်သူလူထု၏ အကူအညီရယူပြီး ထု(၃)ထု ပူးပေါင်းပြီး ရဟန်းပျက်များအား စိစစ်ခဲ့ရာမှ ရဟန်းပျက်ပေါင်း(၁၀၀၀၀)ကျော်အား နှင်ထုတ်ခဲ့ရသည်။
- ၎င်းးရဟန်းပျက် (၁၀၀၀၀)ကျော်ကို တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်လိုက်ရာ ၎င်းတို့သည် ဟိမ၀န္တာတောင်ခြေဖက် သို့ သွားရောက်ခဲ့ရာ ၎င်းနေရာရှိ မင်းတစ်ပါးမှ သနားပြီး ခိုလှုံခွင့်ပေးလိုက်ရာမှ ၎င်းတို့သည်လည်း သင်္ဂါယနာစင်ပြိုင်တင်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့မှာ ကြီးမားသော အင်အားရှိသဖြင့် မဟာသံဃိကဂိုဏ်းဟု ခေါ်ဆိုကြပြီး ဝေသာလီ၌ ကျန်ရှိခဲ့ကြသော ရဟန္တာ (၇၀၀)ပါသော အဖွဲ့အား ဟီနယာနဂိုဏ်း သေးငယ် သောအဖွဲ့ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။
- သာသနာတော်ညှိုးနွမ်းလာသော အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ရန် သံဃာထု မင်းထု ပြည်သူလူထု ထု(၃)ထုမှ ပူးပေါင်းပြီး ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် လာခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပေသည်။
သာသနာနှစ် (၂၃၅) နှစ် ကြာပြီးနောက် ပါဋလိပုတ်ပြည်တွင် မိစ္ဆာအယူရှိသော ရဟန်းအတု (၆၀၀၀၀) ကျော်အထိ သာသနာအတွင်း အယောင် ဆောင်ပြီး ၀င်ရောက်လာကြသည်ကို အကြောင်းပြုပြီး တင်ခဲ့ ရသည်။
- ရဟန်းအတု (၆၀၀၀၀) ကျော် သာသနာအတွင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပြီး ကတုံးတုံးသင်္ကန်းစည်းသည်နှင့် ရဟန်းဖြစ်ပြီးလုပ်ချင်သလို လုပ်နေကြရာ သာသနာ လွန်စွာမှ ညှိုးမှိန်လာခဲ့ပြီး ၀ိနည်းတော်နှင့်အညီ ကျင့်ကြံအားထုတ်နေကြသော ရဟန်းအစစ်တို့မှာ လွန်စွာချို့တဲ့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရသည်။
- အရှင်တိဿမထေရ်ကြီး ဦးဆောင်သောရဟန္တာ (၁၀၀၀) ပါသော သံဃာထု သီရိဓမ္မာသောကမင်း၏ မင်းထု နှင့် သာသနာဝင်များ ပြည်သူလူထု စသော ထု (၃) ထု ပူးပေါင်းပြီး နှုတ်ထက်အက္ခရာ သင်္ဂါယနာ တင်ခဲ့ရာ အချိန် (၉) လ ကြာမြင့်ခဲ့သည်။
- အယောင်ဆောင်ဝင်လာသော ရဟန်းအတုများအား စိစစ်ပြီးလူဝတ်လဲစေခြင်း သာသနာတော်မှ နှင်ထုတ်ခဲ့ခြင်းတို့ဖြင့် သာသနာတော် ညှိုးနွမ်း နေမှုကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြပေသည်။
- သီရိဓမ္မာသောကမင်းသည် သင်္ဂါယနာတင်ပြီးနောက် ကိုးတိုင်းကိုးဌာန သာသနာပြုအဖွဲ့များစေလွှတ်ပြီး အကြီးမားဆုံးသော သာသနာပြု လုပ်ငန်းကို ကမ္ဘာအနှံ့ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကမ္ဘာ့အင်ပါယာတစ်ခုလုံး၏ (၅) ပုံ (၄) ပုံသည် ဗုဒ္ဓသာသနာတော် လွှမ်းမိုးခဲ့ရသည်။
- မြန်မာနိုင်ငံသို့ သာသနာရောက်ရှိလာရခြင်းသည် သုဝဏ္ဏဘူမိသာသနာပြုအဖွဲ့မှ အရှင်သောဏနှင့် အရှင်ဥတ္တရမထေရ် (၂) ပါး ဦးဆောင်သော ရဟန္တာ (၅) ပါးအဖွဲ့၏ သထုံဖက်မှ ၀င်ရောက် သာသနာ ပြုရာမှအစပြုပြီး ရောက်ရှိလာရခြင်းဖြစ်သည်။
သာသနာနှစ် (၄၅၀) ကြာသော် သီဟိုဠ်နိုင်ငံသို့ သာသနာကူးပြောင်းလာခဲ့ရာတွင် အငတ်ဘေးနှင့်သူပုန် ဘေးကြီး (၁၂)နှစ်ကြာကျရောက်ခဲ့ရသဖြင့် သံဃာအစစ်များ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြမှုကို အကြောင်း ပြုပြီးတင်ခဲ့သည်။
သီဟိုဠ်နိုင်ငံ မလယဇနပုဒ် အလောကလိုဏ်ဂူ
- သီရိဓမ္မာသောကမင်း၏ သားတော်ရဟန္တယမဟိန္ဒနှင့်သမီးတော်ရဟန္တာ သင်္ဃမိတ္တာထေရီတို့ ပြုခဲ့သောသာသနာသည် သီဟိုဠ်တွင် ထွန်းကားခဲ့ရာမှ အငတ်ဘေးနှင့် သူပုန်ဘေးများ (၁၂) နှစ်ကြာ ပေါ်ပေါက်သဖြင့် ဒါယကာ ဒါယိကာမများမှ ပစ္စည်းလေးပါးပံ့ပိုးမှုမရှိတော့သဖြင့်ဝိနည်းလေးစားသော သံဃာအစစ်တို့သည် ဒုက္ခရောက်ကြရသည်။
- အချို့သော သံဃာအစစ်တို့သည် ဘုရားရှင်၏ ဓမ္မများ မပျောက်ပျက်ရလေအောင် နှုတ်ဖြင့်ရွတ်ဆိုရင်း သဲသောင်ပေါ်တွင် ဗိုက်ပေါ်သဲများ တင်ပြီးမမေ့လျော့အောင် ရွတ်ဖတ်ထိန်းသိမ်းနေကြသည်။ အချို့သံဃာတို့တွင်လည်း လွန်စွာချို့တဲ့လာကြသဖြင့် နီဝရဏတရားများ လွှမ်းမိုးလာ ကြသည်။
- သူပုန်ဘေး (၁၂) နှစ်ကာလပြီးဆုံးချိန်တွင် သာသနာလွန်စွာ ညှိုးမှိန်နေသဖြင့် အရှင်မဟာဓမ္မရက္ခိတ မထေရ် ဦးဆောင်သောရဟန္တာ (၅၀၀) တို့ ပါဝင်သော သံဃာထု အထောက်အပံ့ပြုကြသော ၀ဋ္ဋဂါ မဏိမင်း၏ မင်းထု သာသနာဝင်များ ပြည်သူလူထု ထု (၃) ထု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။
- ပိဋကတ်တော်များသည် နှုတ်ထက်အက္ခရာတင်လျှင် နောင်တွင် အလွယ်တကူ ပျောက်ကွယ်သွား နိုင်သည်ကို သိလာသဖြင့် မှတ်တမ်းအဖြစ် ပေရွက်ပေါ် ရေးတင်ပြီး ပေထက်အက္ခရာတင်ခဲ့ရာ တစ်နှစ် ကြာမြင့်ခဲ့သည်။
သာသနာနှစ် (၂၄၁၅) ကြာပြီးနောက် စတုတ္ထနှင့်ပဉ္စမအကြိမ်ကြားတွင် နှစ်ပေါင်း (၂၀၀၀) ခန့် ကြာမြင့် ခဲ့သည့်အတွက် ပေရွက်ပေါ်တင်ထားမှုသည် ရာသီဥတုနှင့်ပိုးမွှားအန္တရာယ်တို့ကြောင့် ကြာရှည်ခံနိုင် မှုမရှိဘဲ ဖြစ်လာခြင်း မူကွဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတို့အပေါ် အကြောင်းပြု၍ တင်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ မန္တလေးမြို့ ရတနာပုံနေပြည်တော်
နှုတ်ဖြင့်ရွတ် (၅) လ (၃) ရက်
ကျောက်ထက်တင် (၇) နှစ် (၆) လ (၁၄) ရက်
- သာသနာနှစ် (၂၄၁၅) နှစ် ကြသော် ပေရွက်ပေါ်တင်ထားသော ပိဋကတ် (၃) ပုံတို့သည် ရာသီဥတုနှင့် ပိုးမွှားအန္တရာယ်တို့ကြောင့် ပျက်စီးလာခဲ့ခြင်းနှင့် အချို့မူကွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတို့ကြောင့် အရှင်ဇာဂရ မထေရ် ဦးဆောင်သော ရဟန်း (၂၄၀၀) ပါဝင်သော သံဃာထု သည် ထောက်ပံ့ကူညီပေးသော မင်းတုန်းမင်း၏ မင်းထု နှင့် သာသနာဝင်များ ပြည်သူလူထု စသော ထု (၃) ထု ပူးပေါင်းပြီး မန္တလေးမြို့ ရတနာပုံနေပြည်တော်တွင် သင်္ဂါယနာတင်ခဲ့ကြသည်။
- နှုတ်ဖြင့်ရွတ်ဆိုတင်ခဲ့ခြင်းသည် (၅) လနှင့် (၃) ရက် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနောက် ပိဋကတ်တော်များကို ကမ္ဘာတည်သရွေ့ကြာရှည် မပျက်စီးရလေအောင် စကျင်ကျောက်ပြားအပေါ်၌ ထွင်းထုရေးသားခဲ့ရာ စကျင်ကျောက်ဖြူအပြားပေါင်း (၇၂၉) ချပ်ရရှိခဲ့ပြီး အချိန်အားဖြင့် (၇) နှစ် (၆) လ နှင့် (၁၄) ရက် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင် မန္တလေးလောကမာရဇိန် ဘုရားဝင်းအတွင်း၌ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစာအုပ် (The World Biggest Book) ဟူသောအမည်ဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ဆောင်မှတ်တိုင်ကြီး အဖြစ် လွန်စွာထင်ရှားခဲ့ပေသည်။
သာသနာထွန်းကားရာ မြန်မာနိုင်ငံသည် တစ်ပါးသော ဘာသာဝင်တို့၏ သူ့ကျွန်ဘ၀ရောက်ခဲ့ပြီး နှစ်(၁၀၀)ခန့် သာသနာညှိုးနွမ်းမှုအပေါ် အကြောင်း ခံပြီးသာသနာနှစ် (၂၄၉၈) နှစ်တွင် သင်္ဂါယနာတင်ခဲ့ရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ မဟာပါသာဏလိုဏ်ဂူ
ညောင်ရမ်းဆရာတော်အရှင်ရေ၀တ၊ မဟာစည်ဆရာတော်အရှင်သောဘဏ၊ မင်းကွန်းဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖဆပလ ဦးနု အစိုးရ
ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားဆုံးဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံသည် သူ့ကျွန်ဘ၀ နှစ် (၁၀၀)ခန့် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး သာသနာတော် လွန်စွာညှိုးနွမ်းလာခဲ့သည်။ သူ့ကျွန်ဘ၀မှ လွတ်မြောက်လာသည်နှင့် သာသနာနှစ် (၂၄၉၈) နှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ မဟာပါသာဏ လိုဏ်ဂူတွင် ဆဋ္ဌမအကြိမ် သင်္ဂါယနာတင်ပြီး သာသနာတော်ကို စောင့်ရှောက်ခဲ့ရသည်။
Posted by Oasisthetoo at 8:28 AM No comments: Links to this post
သီတဂူဆရာတော်ကြီး “ငါတို့ကို တိုင်းပြည်နှင့်သာသနာက ...
ဗုဒ္ဓတံဆိပ် ခပ်နှိပ်စေ အိုမဖုတ်ခင် အိုးလုပ်စဉ်ဝယ် အ...
ကျမ်းပြုအကျော် မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် ဦးတည်မပျက် ရှေ့သ...
မေး။ ။ အရှင်ဘုရား တပည့်တော် ရှစ်ပါးသီလမှာ ဥစ္စာသယန ...
ကြီးပွားတိုးတတ်ချင်လျှင်မေး။ ။ အရှင်ဘုရား တပည့်တော...
သေခါနီးမှာ ဖြစ်ပေါ်လာသော အာရုံ(၃)မျိုးမေး။ ။ အရှင်ဘ...
ပစ်မရှိ ပြစ်ရှာ။ လမင်းကိုခွေးဟောင်လို့ ရွှေလရောင် ...
ငါသာ ငါ့ထက်၊ မာန်မတက်နှင့် အထက်နေမင်း၊ လေးကျွန်းချ...
Time Magazine ကို ကျွန်တော်မုန်းသွားပြီ... သေနတ်တစ...
ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် ကမ္ဘာကျော်လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အတွေး အမြင် ...
သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရား၏သြ၀ါဒသေခါနီး စိတ်ကလေး ထားတတ်ဖ...
သပြေကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ မရဏသတိကထာ ...
*လောကတွင် ပျက်စီးခြင်း ဆုတ်ယုတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော...
*ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုး ၁။ မိမိ အကျိုးသာကျင့်၍ သူတစ်ပါး...
လက်သစ်တောင်တာဆုံးမစာ ၁။ လက်သစ်တောင်တာ၊ ယူဇနာပေါင်...
ရခိုင်၏သမိုင်းကို နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာအသေးစိတ် သ...
*နောင်တ (၁၀)ပါး*။နောင်တ ဆယ်ပါး ကြိုသိထားသင့် * ငယ်...
. *ရှင်ရာဟုလာကိုပေးတဲ့ သြ၀ါဒ* အပြု (ကာယကံ) ပြုမည်ြ...
အသက် ၄၅ နှစ် အရွယ်ရှိ ကျောင်းဆရာဖြစ်သူ ပေါလ်ဟာ အရေ...
ယောက်ျားတို့အတွက် သင်္ဘောရွက်ယောက်ျားမှာ ဆီး၊ မိန်းမ...
အနိစ္စ, ဒုက္ခ, အနတ္တ, လက္ခဏာရေး ၃-ပါး အိုအိုလူများ, သတ...
သံဝေဂဝတ္ထု ရှစ်ပါး အမိဝမ်းခေါင်း, ဆယ်လညောင်းမျှ, အေ...
(ဘုရားရှင် ပွင့်တော်မူရခြင်း၏ ရလာဘ်) ဘုရားရှင်တော်...
မြတ်ဗုဒ္ဓမိန့်တော်မူခဲ့သော သံဃာတော်များ လူထွက်ရခြင်...
သင်္ဂါယနာတင်ကြခြင်း - ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနောက...